NT / Oromo by MediaServe - Issuu
Kitaaba Jireenyaa K A K U U
H A A R A A
Barreeffami Kakuu Haaraa kun Kitaaba Qulqulluu (Orominya New Testament), copyright © 2006, 2009 by Biblica, Inc.® Mirgi hundinu Seeraan Eegamaadha The Kitaaba Qulqulluu text may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio), up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for twenty-five percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. Permission requests that exceed the above guidelines must be directed to and approved in writing by Biblica, Inc.® 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921, USA, Biblica.com. Notice of copyright must appear on the title or copyright page as follows: Scripture quotations taken from Kitaaba Qulqulluu (Orominya New Testament) Copyright © 2006, 2009 by Biblica, Inc.® Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. When quotations from the Kitaaba Qulqulluu text are used by a local church in non-saleable media such as church bulletins, orders of service, posters, overhead transparencies, or similar materials, a complete copyright notice is not required, but the title (Kitaaba Qulqulluu) must appear at the end of each quotation. Biblica provides God’s Word to people through Bible translation &amp; Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South Asia. Through its worldwide reach, Biblica engages people with God’s Word so that their lives are transformed through a relationship with Jesus Christ.
“Waaqayyoon Dhuunfaan Beekuu”, copyright © 1968-2012 Bright Media Foundation and CCCI (Barreeffama isa “Seera Hafuuraa Afuran dhageesseettaa?” jedhu Bill Bright © 1965-2012 BMF and CCCI); fi “Jireenya Kee Kiristoos Keessatti”, copyright © 1984-2012 CCCI. Mirgi hundi eegamaadha Maxxansi jalqabaa kun bara 2015 maxxanfame MediaServe maxxanfame www.mediaserve.org ISBN 978-1-906389-46-8 Oromo Chaayinaatti Maxxanfame, 2015
Kan Hin Gurguramne
Fayyisaa – Dhageessee? – Maal? – Misiraachoo Fayyinaa? – Maalirraa nama fayyisaa? – Du’arraa.
Fayyisaan kun eessatti argamaa? Guddaa waan ta’eef bakka hunda jira. In dhagaha waan ta’eef, yoo waaman ni owwaata. Ni arga waan ta’eef, rakkoo keessaa nama baasa.
Maqaan Fayyisaa kanaa Eenyuu? Yesuus Kiristoos [Amaanu’eel] jedhama. Yesuus jechuun hundaaf qoricha ykn dawaa jechuu dha. Hundaaf qoricha yeroo jennu, beekaaf wallaalaa, xinnaaf guddaa, qomoof sabaan osoo addaan nama hin qoodne, nama hundumaa kan fayyisu jechuu dha.
Maalif Yesuusitti amannaa? Lafa hin dubbanne irratti abdiidhaan sanyii facaafannee callaa guddaa irraa in eegganna mitiree? Konkolaataa nama baay’ee karaatti hambiseyyuu yaabbannee yeroo daandii deemnu, of gannee in rafna mitiree? Lafti hin dubbanne erga callaa kennee, konkolaataan lubbuu hin qabne erga bakka v
yaadneen nu gahee, Jireenya bara baraa kan qabu, guddaan lafaa fi samii kana uume, nuuf hin amanamuuree? Lafarraa erga kana argannee, Yesuusitti amanuu jechuun ammoo kanaa ol, eessatti illee, nama kamiin illee kan hin argamne, Jireenya bara baraa argachuudha. Jireenya bara baraa argachuunis Yesuusitti amanuudhaani. Amanachuu jechuun gooftummaasaa, waaqummaasaa, guddummaasaa, fayyisaa ta’uusaa fi gatii inni fannoorratti nuuf kaffalame beekanii fudhachuu jechuu dha.
Akkamitti Amannaree? Ati hin dhageenye malee, Yesuus Kiristoos, yeroo hundaa akkas jedha, “Isin warri dadhabdan, warri ba’aan isinitti ulfaa­te hundinuus, gara kiyya koo­t taa; Anis isin boqochii­ sa” (Maatewoos 11: 28 fuula 23). Dubbii Waaqayyoo jalqabatti dhagahuu, kan irraa dhagahan ammoo sagalee isaa dubbisuu, erga dubbisnee booda amanuu (Roomaa 10:17 fuula 325). Waaqayyo immoo abbaa keenya. Abbaa ofii dubbisuun, dhimma ofii itti himachuun, isatti kooluu galuun, qabeenya abbaa ofii dhaaluun akka jiru ammoo beekamaa dha. Kitaaba kana keessatti “Ani Abbaa isinii ta’a; isinis ilmaanii fi dubra kiyya ni taatu; jedha Gooftaan waan cufa danda’u” (2 Qorontoos 6:18 fuula 371). Waaqayyo waan lafa kanarratti uume hundumaa keessaa, siin adda godhee si uume. Wanti adda si taasisus waan sadi. Isaanis 1. Akka bifa ofii Isaatti si uume. 2. Hfuura isaatiin si uume. 3. Harka isaatiin si uume. Dhala namaatiin alatti Waaqayyo, waan biyya lafaa irratti argaman hunda “ta’i” jedhee abboomuudhaan uume malee akka siin uumetti isaan hin uumne. “Badi” jennaanis ni badu malee jireenya bara baraa hin qabani. Ati garuu
jireenya bara baraa qabda. Kanaaf namni inni jalqabaa karaa Addaam cubbuu hojjetee erga jennata keessaa ba’ee booddee, jireenya bara baraa keessaa bahee du’a jala seene namni. Waaqayyo garuu tokkicha ilma Isaa gara biyya lafaatti erguudhaan dhala namaa du’a jalaa akka furu taasise. Ilmi Isaa kunis Yesuus Kiristoosi. Ilmaan namaatiif kan kenname karaan fayyinaa tokko malee kan biraa hin jiru. Innis Yesuus Kiristoos qofa. Kanaaf Waaqayyo abbaan namni jireenya bara baraa akka qabaatuuf, tokkicha ilmasaa gara biyya lafaatti erge. Wangeela Yohaannis 3:1 (fuula 190) irratti akkaataan fayyinaa akkamitti akka ta’e, namni maqaan isaa Niqoodmoos jedhamu tokko Yesusiin gaaffii gaafate. Akka fayyuuf maal gochuu akka isa barbaachisu isa gaafte. Yesuus immoo namni bishaanii fi afuura irraa lammaffaa yoo dhalachuu baate, jireenya bara baraa hin argatu jechuudhaan deebiseefi. Niqoodmoos ammas namni erga guddatee booda, garaa haadha isaatti deebi’ee lammaffaa dhalachuu attamitti danda’a jechuudhaan Yesuusiin gaafate. Yesuus ammoo lammaffaa dhalachuu jechuun afuuraaf bishaaniini malee fooniin mitii jedheen. Kanaaf namni kamiyyuu yommuu tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuusitti amanatu, mallattoon jireenya bara baraa argachuu isaa afuuraan chaappeffamaafi (Efesoon 4:30 fuula 396). Akkuma yommuu meeshaa tokko bitnu, meeshichi bitamuu isaa mallattoo akka godhannu, nutis gaafa Yesuusitti amannee jalqabnee, namoota biyya lafaa warra hin amaniin keessaa mallattoo addaa qabna. Mallattoon kunis nuti kan dhuunfaa Waaqayyoo ta’uu keenya agarsiisa. Yeroo amannu, 1ffaa. Kiristoosiin akka fayyisaa mataa keenyaatti amanachuu dha.
. Lubbuu keenya, humna keenyaa fi garaa keenya guutuun Waaqayyoon jaalachuu dha.
3ffaa. Kiristoosiin uffachuu dha. Uffachuu jechuun, nuti isa keessa, innis nu keessa jiraachuu jechuu dha. Waan mara kan caalu, hubannaa dansaa kan namaaf kennu, akkuma fooniif nyaatni yeroo mara barbaachisu, lubbuu keenyaafis soora barbaachisu kitaaba kana keessaa arganna. Kitaabichis sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo ammoo yaada Waaqayyoo, qajeelfama jireenya namaa, daandii fayyinaa, adaba jalloota eeggatuu fi gammachuu amantootaa of keessaa qaba. Kanaaf ogeessa ta’uuf isa dubbisi, sodaa ooluuf isatti amani, qullaa’aa ta’uuf isaaf jiraadhu. Inni gara itti gortu si agarsiisuuf ibsaa of keessaa qaba, utubee si dhaabuuf humna hin mittiqne, kan si jajjabeessu isa biraa argatta. Barumsi isaa qulqulluu, seerratni isaa dinqisiisaa, seenaan isa keessa jiran hundinuu dhugaadha, murtoowwan isaas kan hin jijjiiramne, dhaabbataa dha. Egaa suuta jedhii yaadaaf qalbii guutuudhaan Waaqayyoon kadhachaa, irra deddeebi’ii dubbisi. Kakuun Haaraan kun deemsa jireenya hafuuraa keetti si gargaar. Akka ati Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya uummattuu fi walitti dhufeenya kana cimsattuuf akka si gargaaraniif jecha barumsaaleen afur as keessa galfamaniiru.
Qabeentaa Dursa: Waaqayyoon Dhuunfaan Beekuu	xi Kakuu Haaraa: Maatewoos	1 Maarqoos	69 Luqaas	112 Yohaannis	185 Hujii Ergamootaa	238 Roomaa	308 1 Qorontoos	336 2 Qorontoos	363 Galaatiyaa	381 Efesoon	390 Filiphisiyuus	399 Qoloosaayisii	407 1 Tasaloonqee	413 2 Tasaloonqee	419
1 Ximootewoos	422 2 Ximootewoos	431 Tiitoo	436 Filmoonaa	440 Ibroota	441 Yaaqoobii	463 1 Pheexiroosi	471 2 Pheexiroosi	479 1 Yohaannisi	484 2 Yohaannisi	491 3 Yohaannisi	492 Yihuudaa	493 Muldhata	495
Jireenya Kee Kiristoos Keessatti: Barumsa tokko: Jalqaba	533 Barumsa lama: Jaalala Waaqayyoo Miâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;eeffachuu	539 Barumsa sadi: Burqaa Humnaa	546 Barumsa afur: Kiristoos Keessatti Guddachuu	553
Waaqayyoon Dhuunfaadhaan Beekuu Akkuma seerri addunyaa hafuuraa to’atu jiru, seerri hafuuraa walitti dhufeenya ati Waaqayyoo wajjin qabdu to’atus jira. Seera Tokko Waaqayyo nu jaallata, kanaaf jireenya keenyaaf karoora amansiisaa kenne. Jaalala Waaqayyoo “Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii” (Yohaannis 3:16 fuula 190). Karoora Waaqayyoo (Kiristoostu dubbata) “Hattuun: hatuuf, ajjee­suu fi ballee­ssuu qofaaf dhufti; ani garuu akka isin jiree­nya qabaa­t taniif, jiree­nya irraa hafaas akka qabaa­t taniif dhufee­ra” (Yohaanis 10:10 fuula 210). Maaliif namoonni baay’een jireenya irraa hafaa fi quubsaa ta’e hin jiraatanii? Sababiin isaa…
Seera Lama Nuti cubbamoota Waaqayyoo irraa adda baaneedha. Kanaaf jaalala Waaqayyoo fi karoora inni jireenya keenyaaf qabu beekuu fi shaakaluu hin dandeenyu. Nuti cubbamoota “Hattuun: hatuuf, ajjee­suu fi ballee­ssuu qofaaf dhufti; ani garuu akka isin jiree­nya qabaa­t taniif, jiree­nya irraa hafaas akka qabaa­t taniif dhufee­ra” (Roomaa 3:23 fuula 312). Nuti kan uumamne Waaqayyoo wajjin akka tokkummaa qabaannuufiidha, garuu sababii fedhii ofii isa jal’aatiif daandii ofii keenyaa filachuu keenyaan walitti dhufeenyi nuti Waaqayyoo wajjin qabnu cite. Fedhhiin ofii kun immoo ilaalcha fincilaa qabaachuu ykn giddugaleessa ta’uudhaan kan mula’atu si’a ta’u, isa kanaan immoo Kitaabin Qulqulluun cubbuu jedha.
Nuti gargar baafamne “Gatiin cubbuu du’aatii; kennaan Waa­qayyoo garuu karaa Goo­f taa kee­ nya Kiristoos Yesuu­sii­tiin jiree­nna barabaraa ti” [karaa hafuuraa Waqayyo irraa adda ba’uu] (Roomaa 6:23 fuula 318).
Fakkiin kun nuti cubbamoota Waaqayyo immoo qullaa’aa ta’uu mul’isa. Sululli guddaan kun addaan nu baase. Xiyyi kun kan mul’isu akka namni walitti fufiinsaan Waaqayyo bira ga’uuf yaalii taasisuu fi jireenya irraa hafaa karaa tattaafii keenyaa, kan akka jireenya gaarii, falaasama ykn amantii mul’isa.
Seerri inni sadaffaan immoo waa’ee riqicha isa tokkichaa sulula kana irra ceesisuu ibsa…
Waaqayyoon Dhuunfaadhaan Beekuu
Seera sadii Waaqayyo cubbuu keenyaaf Yasuus Kiristoosiin qofa kenne. Karaa isaa qofa jaalala Waaqayyoo fi karoora inni jireenya keenyaaf qabu beekuu fi mi’eeffachuu dandeenya. Inni qooda keenya du’e “Garuu otoo nu cubbamtoo­ta taa­nee jirruu Kiristoos nuuf jedhee du’e; kunis jaa­lala Waa­qayyo nuuf qabu agarsii­sa” (Roomaa 5:8 fuula 316). Inni du’a keessaa ka’e “… Kiristoos cubbuu kee­nnaaf jedhee du’e; ni awwaa­lames; akka kitaa­ bonni qulqulluu­ni dubbatanitti guyyaa sadaffaa­t tis du’aa kaa­fame. Inni duraan dursee Phee­xiroo­sitti, eegasiis warra kudhanii lamaa­nitti muldhate. Sana boo­ddees yeroo tokkotti obbolee­y yan dhibba shanii ol ta’anitti muldhate…” (1 Qorontoos 15:3-6 fuula 358-359).
Inni daandii tokkicha gara Waaqayyootti geessuudha “Yesuu­sis akkana jedhee dee­biseef; ‘Karaa fi Dhugaa­ni, Jiree­nnis anuma; yoo anaan ta’e malee eennuyyuu gara Abbaa hin dhufu’ ” (Yohaannis 14:6 fuula 221).
Fakkiin kun akka Waaqayyo sululicha isa nuun Isa irraa adda nubaase irra akka nu ceesise mul’isa, kun immoo Ilma Isaa Yasuus Kiristoosiin erguudhaan akka inni qooda keenya fannoo irratti du’ee adabbii cubbuu keenyaa baasu taasisuudhaani.
Seerota kanneen sadan qofa beekuun ga’aa miti…
Seera afur Matayyaatti Yasuus Kiristoosiin akka Fayyisaa fi Gooftaa keenyaatti fudhachuu qabna, kana booda jaalalaa fi karoora Waaqayyo jireenya keenyaaf qabu beekuu dandeenya. Kiristoositti amanachuu qabna “Warra isa simatanii maqaa isaa­t ti amananiif garuu ijoo­llee Waa­qayyoo akka ta’an mirga kenneef” (Yohaannis 1:12 fuula 186). Karaa amantii Yasuusiin fudhachuu qabna “Isinis ayyaa­naan karaa amantii­tiin fayyitanii­r tuu­tii; kunis kennaa Waa­ qayyoo­ti malee hujii ufii kee­ssanii­tii miti. Akka namni tokkoyyuu uf hin jajnee­fis kuni hujii­nii miti” (Efesoon 2:8-9 fuula 392). Yeroo Kiristoositti amannu, haaraa dhalanna (Yohaannis 3:1-8 fuul 190 dubbisi). Afeerraa dhuunfaatiin Kiristoosiin fudhanna (Kiristoostu dubbata) “Kunoo ani balbala dura dhaa- badhee balbala rurrukuta; namni kamiyyuu yoo qoonqa kiyya dhagayee balbala naa bane, ani ol-seenee isa wajjiin irbaata nyaadha; innis na wajjiin ni nyaata.” (Muldhata 3:20 fuula 502). Kiristoositti amanuun karaa ofii dhiisanii Waaqayyootti deebi’uu (yaada jijjiirrachuu) fi akka Kiristoos gara jireenya keenyaa dhufee cubbuu keenya nuuf dhiisuuf akkasumas namoota inni barbaadu akka nu taasisuuf isa amanachuu. Akka Yasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta’ee fi akka inni cubbuu keenyaaf nuuf du’e beeknee itti walii galuun qofti ga’aa miti. Yokaan miira keenya qofaan muuxannoo isaa qabaachuun qofti ga’aadhaa? Yasuus Kiristoosiin amantiidhaan fudhanna, kun immoo gocha fedhiidhaan taasifamuudha.
Geengooleen armaan gadii lamaan jireenya gosa lama bakka bu’u:
Jireenya Anummaan gaggeessu:
A:	Anummaan teessoo irra jira :	Kiristoos jireenya keessaa ala jira
•:	Fedhiin anummaadhaan qajeeffama, kun immoo waliigatee dhabuu fi sodaatti geessa
Jireenya Kiristoosiin gaggeeffamu: :	Kiristoos jireenyicha keessaa fi teessoo irra jira
A:	Anummaan Kiristoosiif ooleera
•:	Fedhiin Kiristoosiin qajeeffama, kun immoo karoora Waaqayyoo wajjin waliigatee uuma
Geengoo isa kamtu jireenya kee sirriitti bakka bu’a? Geengoo isa kamtu jireenya kee akka bakka bu’u barbaadda? Ammuma karaa kadhannaa Yasuusiin amantiidhaan simachuu dandeessa. Kadhannaan Waaqayyoo wajjin dubbachuudha. Waaqayyo garaa/ laphee keettii malee jechoota keettii dhimma hin qabu, Inni yaada garaa keetii ilaalawoo. Armaan gaditti kadhannaan ta’uu malu ka’ameera: “Yaa gooftaa Yasuus, sin barbaada. Cubbuu kootiif jettee fannoo irratti du’uu keetiif sin galateeffadha. Balbala garaa koo banee akka Fayyisaa fi Gooftaa kootti sin simadha. Cubbuu koo anaaf dhiiftee jireenya bara baraa anaaf kennuu keetiif sin galateeffadha. Teessoo jireenya kootii ati dhuunfadhu. Nama ati barbaaddu akkan ta’uuf ana gargaari.” Kadhannaan kun fedhii garaa keetii ni ibsaa laata? Yoo ni ibsa ta’e, kadhannaa kana amuma kadhadhu, Kiristoos immoo gara jireenya keetii ni dhufaatii akkuma abdachiisetti.
Wangee­­­l a Maa­t ewoo­si Hidda Dhaloota Yesuus Kiristoosii
Yoraam Ooziyaa dhalfate; Ooziyaan Yo’ataa­min dhalfate; Yo’ataam Akaa­zin dhalfate; ‌Hiddi dhaloo­ ta Yesuus Akaaz Hizqiyaa­sin dhalfate; Kiristoo­si isa sanyii Daa­witii, sanyii Abrahaa­ mii ta’e sanaa 10	Hizqiyaas Minaa­see dhalfate; kana: Minaa­seen Amoo­nin dhalfate; Amoon Yoo­siyaa­sin dhalfate; 2 a Abrahaam Yisaa­qin dhalfate ; 11 Yoo­siyaas bara boo­juu Baa­ Yisaaq Yaa­qoo­bin dhalfate; biloo­nii kee­ssa, Yaa­qoob Yihudaa­fii obbolee­ Ikoo­niyaa­nii fi obbolee­yyan yyan isaa dhalfate; isaa dhalfate. 3 Yihudaan Ti’imaar irraa Faa­ 12 resii fi Zaa­raa dhalfate; Boo­juu Baa­biloo­nii boo­ddeeb, Faa­res Hesronin dhalfate; Ikoo­niyaan Salaatiyaalin Hesron Araa­min dhalfate; dhalfate; 4 Salaa­tiyaal Zarubaabelin Araam Amii­naa­daa­bin dhalfate; dhalfate; 13 Amii­naa­daab Nahasoonin Zerubaa­bel Abiyuudin dhalfate; dhalfate; Abiyuud Eliyaa­qee­min Nahasoon Salmoo­nin dhalfate; dhalfate; 5 Eliyaa­qeem Aazaa­rin dhalfate; Salmoon Ra’aab irraa Bo’eezin 14 dhalfate; Aazaar Saa­doqin dhalfate; Bo’eez Ruut irraa Yoobeedin Saa­doq Akii­min dhalfate; dhalfate; Akiim Eliyuu­din dhalfate; 15 Yoo­beed Isee­yin dhalfate; Eliyuud Alaa­zaa­rin dhalfate; 6 Alaa­zaar Maa­taa­nin dhalfate; Iseey Daa­wit Mooticha Maa­taan Yaa­qoo­bin dhalfate; dhalfate. 16 Daa­wit nii­tii Oriyoo­nii irraa Yaa­qoob Yoo­see­fin dhalfate; Solomoo­nin dhalfate; Yoo­seef kunis dhii­rsac Maa­riyaa­mii­ti; 7 Solomoon Roo­bi’aamin dhalfate; Maa­riyaam immoo ishii Yesuus Roo­bi’aam Abiyaa dhalfate; isa Kiristoos jedhamu dee­ssed Abiyaan Asaa­fin dhalfate; sanaa dha. 8 Asaaf Yosaa­fixin dhalfate; 2 ykn dhalche / ​godhate / ​Uumate; ​12 ykn duuba; ​ Yosaa­fix Yoraa­min dhalfate; 16 ykn abbaa manaa / ​abbaa worraa; ​16 ykn deette; ​ 1:1-7 Kwf =&gt; Luq 3:23-38
Eegaa walumaa galatti Abrahaa­ mii hanga Daa­witii­tti dhaloo­ta kudhanii-afuri, Daa­ witii hanga boo­juu Baa­biloo­nii­tti dhaloo­ta kudhanii-afuri, boo­juu Baa­biloo nii­tii hanga Kiristoo­sii­tti dhaloo­ ta kudhanii-afurtu ture.
Dhalachuu Yesuus Kiristoosii
24 Yoo­see­fis hirrii­baa dammaqee akkuma malee­kaa­ni goo­ftaa isa ajajetti Maa­ riyaa­ min nii­ tummaa­dhaan mana isaa­tti fudhate. 25 Garuu inni hanga is­ hiin ilma hangafa dee­ttutti ishii­tti hin buu­ne. Maqaa isaas, “Yesuus” jedhee moggaa­se.
Dhalachuu­ ni Yesuus Kiristoo­ ‌Bara moo­ ticha Herodisii sii akkana ture: Haa­ti isaa Maa­ kee­ ssa, erga Yesuus kutaa riyaam kaa­dhimae Yoo­see­fii tur­ biyyaa Yihudaa magaa­ laaj Bee­ te; isii­ nis otoo Yoo­ seef wajjiin talii­hee­mii­tti dhalatee boo­ddeek, wal-bira hin gayin hafuu­ra Qul­ bee­ttonni tokko ba’a bii­ftuu­tii qulluun ulfoo­ftee argamte. 19 Yoo­ gara Yerusaa­lemi dhufan. 2 Isaa­ f seef Kaa­dhimni ishii sunis waan nis, “inni moo­tii Yihudotaa ta’uuf nama qajee­ laa tureef, dhossaa­ ­ dhalate sun eessa jira? Nu urjii ­dhaan ishii dhii­suu murtee­sse isaa ba’a bii­ftuu­tti arginee isaaf malee uummata duratti ishii qaa­ sagaduu dhufnee­ rra” jedhanii nessuu hin barbaa­nne. gaa­fatan. 20 Otoo inni waan kana yaa­ 3 Herodis Moo­ tichi yommuu daa jiruu, Malee­ kaan goo­ ftaa waan kana dhagayetti ni rifa­ abjuung itti muldhatee, akkana te; Yerusaa­lemis guu­tummaa­tti jedheen; “Yaa Yoo­seef ilma Daa­ isa wajjiin rifatte. 4 Innis luboo­ta witi, kaa­dhimni tee Maa­riyaam hangafoo­taal fi barsii­stota see­raa Hafuu­ra Qulqulluu­dhaan waan hunda saba kee­ssaa walitti qabee, ulfoo­fteef isii fuu­dhuu hin sodaa­ Kiristoos eessatti akka dhalatu tin. 21 Ishiin ilma dee­tti; atis ma­ isaan gaa­fate. 5 Isaa­nis akkana qaa isaa Yesuus jettee moggaa­fta; jedhanii dee­bisaniif; “kutaa biyya inni saba isaa cubbuu isaa­nii irraa Yihudaa, magaa­laa Bee­talihee­mii­ ni fayyisaa­tii.” tti dhalata; kunis dubbii raa­gichim, 22 Kun hundinuu wonni goo­ftaa­ ni karaa raa­jichaa­tiinh dubbate 6	“ ‘Yaa Bee­taliheem ishii biyya sun akka raa­ wwatamuuf i ta’e. Yihudaa, 23 ati matumaan bulchitoo­ta Innis, “Kunoo, dubri tokko ni ulfoo­fti; ilma ni dee­ssi; maqaa 18 ykn intala kadhatan; ​19 ykn gurbaa dubra kadha­ isaas Amaa­ nu’el jedhu” jedha. tu; ​20 ykn oobjuun / ​eebjuun; ​22 ykn raagaatiin; ​ 22 ykn guutamtuuf; ​1 ykn dira; ​1 ykn duubatti; ​4 ykn Amaa­nu’el jechuu­nis,”Waa­qayyo qaallolee gugurdoo; ​5 ykn raajichi; ​6 ykn nu waliin jira” jechuu dha. diqqumallee; ​ 18
Yihudaa­tii gadii miti; Saba koo Israa’elin kan bulchu si kee­ssaa ni ba’aatii’ “ jedhee barree­sse sanaa dha. Kana boo­ddee Herodis bee­ttota sana dhossaa­ tti waa­ mee yeroo itti urjii­ ni sun muldhate isaan irraa hubate. 8 Innis, “Dhaqaa­tii jabee­ssaa mucicha barbaa­daa; yeroo argitanitti immoo akka anis dhufee isaaf sagaduuf koo­ ttaa natti himaa” jedhee Bee­talihee­ mitti isaan erge. 9 Isaa­ nis eegii waan moo­ tichi jedhe sana dhagahanii boo­ddee adee­msa isaa­nii itti fufan; urjii­ni isaa­ni ba’a bii­ftuu­tti argan sunis hanga bakkao mucichi ture ga’ee dhaa­ batutti isaan dura dee­ me. 10 Isaa­ nis yeroo urjii sana arga­ nitti akka malee 11 Akkuma gara manaa­tti ol-see­nanii­nis muc icha, haa­ dha isaa Maa­ riyaam waliin argan; jilbii­nfataniis sagadaniif; qorxiip isaa­niis bananii kennaa warqii, hixaa­ naa fi qumbii dhiyee­ssaniif. 12 Bee­ttoo­nnis akka gara Herodisitti hindee­ bineef waan abjuu­dhaanq uf eegachii­sni isaa­niif kennameef karaa biraa­ tiinr biyya isaa­nii­tti dee­bi’an. 7
himutti mucichaa fi haa­dha isaa fudhadhuu­ tii gara Misrii­ tti ba­ qadhu; achumas turi” jedheen. 14 Yoo­ see­ fis ka’ee mucichaa fi haa­dha mucichaa fudhatee halka­ niin gara Misrii­tti sokke. 15 Hanga du’a Herodisii­ttis achi jiraa­te. Ku­ nis akka wanni Goo­ftaa­ni karaa raa­ jichaa­ tiin, “Ani biyya Misrii irraa ilma kiyya waa­mee­ra” jedhe sun raa­wwatamuuf ta’e. 16 Herodis, yommuu akka bee­ttonni sun isa gowwoo­msan hubatetti akka malee aare. Innis akka yeroo bee­ ttota sana irraa baree­tti, ijoo­llee dhii­raa warra umriin isaa­nii waggaa lamaa fi ha­ gasii gadi ta’e kanneen Bee­talihee­ mii fi naa­nnoo isii mara kee­ssa jiraa­tan nama itti ergee ficcisii­ se. 17 Kanaa­nis raa­jiin Ermiyaa­si dubbate ni raa­ wwatame. Innis akkana jedha: “Sagalee­nis boo’ichaa fi waw waa­nnaat guddaa­ni tokko Raa­maa kee­ssaa dhaga’ame; sababii ijoo­lleen ishii hinjirreef, Raa­hel ni boo­sse; Jajjabaa­chuus hindandee­nne.”
Misriitti Baqachuu Isaanii
Naazireetitti Deebi’uu isaanii
Erga bee­ ttonni sun dee­ manii 19 Eega Herodis du’ee boo­ ddee, boo­ddee, Malee­kaa­ni Goo­ftaa malee­kaa­ni goo­ftaa tokko abjuu­dhaan Yoo­see­fitti muldha­ Misrii­itti abjuu­dhaan Yoo­see­fitti tee, “Sababii Herodis mucicha muldhatee, 20 “Warri lubbuu mu­ ajjee­suu barbaa­duuf, ka’i! Han­ 9 ykn fulaa; ​11 ykn subba; ​12 ykn oobjuun; ​12 ykn ga ani Yeroo ati itti dee­bitu sitti dhibiin; ​18 ykn qoonqoon / ​qoonqii; ​18 ykn oo’insaa; ​
cichaa barbaa­dan waan du’aniif, ka’i! mucicha haa­dha isaa waliin fudhadhuu­tii biyya Israa’eli dha­ qi” jedheen. 21 Kanaaf Yoo­ seef ka’ee mu­ cichaa fi haa­dha mucichaa fudha­ tee biyya Israa’elii dhaqe. 22 Garuu yommuu akka Arkelawoos bakka abbaa isaa, bakka Herodisi Yihu­ daa irratti moo’e dhaga’etti achi dhaquu sodaa­te; Abjuu­dhaa­nis waan ofee­gachii­sni isaaf kenna­ meef gara kutaa biyya Galii­laa dee­me. 23 Achis dhaqee Magaa­ laa Naa­ ziree­ ti jedhamtu tokko kee­ ssa jiraa­ te. Kunis dubbiin, “Inni Naa­ ziricha jedhamee ni waa­mama” jedhamee karaa raa­ gotaa­ tiin dubbatame sun akka raa­wwatamuuf u ta’e. Lallaba Yohaannis Cuuphaa 3:1-12 kwf =&gt; Mar 1:3-8; Luq 3:2-17
‌ ara B sana Yohaa­ n nis Cuu­ phaan lafa onaav biyya Yihudaa kee­ ssatti lallabaa dhufe. 2 Innis, “Moo­tummaa­ ni Samii dhiyaa­tee­raa­tii qalbii jijjii­radhaaw” jedhe. 3 Kunis isa waa­yee­ni isaa karaa Isaa­yyaas raa­jichaa­tiinx, “Sagaleey nama, ‘karaa goo­ftaa qophee­ssaa; daa­ndii isaas qajee­lchaa‘ jedhee lafa onaa kee­ssaa iyyuu tokkoo” jedhamee, dubbatame sanaa­dha. Yohaa­ nnis uffata rifee­ nsa gaa­
laa irraa hojjatame uffata ture; mudhiiz isaa­ ttis tee­ pha hidha­ ta ture; nyaa­ nni isaa immoo hawwaa­ nnisaa fi damma bo­ sonaa ture. 5 Yommus namoo­ nni Yerusaa­lemii­tii fi warri Yihu­ daa hundinuu, warri naa­ nnoo Yordaa­nosis guu­tummaa­tti gara isaa dhufaa turan. 6 Cubbuu isaa­ niis himachaa, laga Yordaa­nosii kee­ssatti harka isaa­tti cuu­phamaa turan. 7 Yommuu Farii­sotaa fi Saduu­ qota kee­ ssaa baay’eeni isaa­ nii otoo gara isaa dhufanuu argetti garuu akkana jedheen; “Isin ijoo­llee buu­tii­nanaa! Dhee­kkamsa dhufuuf jiru jalaa akka baqattaniif eenyuttu isinitti hime? 8 Eegaa firiib qalbii jijjii­rrannaa mirkanee­ssu naqadhaa. 9 Isin, ‘abbaa­ni kee­nya Abrahaa­ mi’ ofiin jechuu waan dandee­ttan hinse’inaa; akka Waa­ qayyo dhagoo­ta kanneen irraa Abrahaa­miif ijoo­llee uumuu danda’u ani isanitti 10 Ammas qottoonc hidda mukkee­nii irra kaa’amee­ ra; Kanaaf mukti firii gaa­rii hin naqanne cuftinuu mu­ ramee ibiddatti naqama. 11 “Ani jijjii­ rrannaa qalbii­ tiif bisaa­niin isin cuu­pha; inni na duu­ baan dhufu garuu na caa­ laa jabaa dha. Ani nama kophee isaa­llee baa­chuuf maluu u 23 ykn guutamtuuf; ​v1 ykn aloo; ​w2 ykn cubbuu irraa x deebi’aa; ​ 3 ykn raagichaatiin; ​y3 ykn qoonqoo / ​qoon­ qa; ​z4 ykn hidhaana / ​hidha; ​a7 ykn buutiitana; ​b8 ykn c midhaani / ​gumaa; ​ 10 ykn dhagaraa; ​
tamaa fi halkan afurtama soo­mee boo­ddeei bee­la’e. 3 Daa­biloo­sis gara isaa dhufee, “ati yoo ilma Waa­qayyoo taa­te akka dhagaan kun buddee­na ta’u ajaji” jedheen. 4 Yesuus garuu dee­bisee, “ ‘namni dubbii afaan Waa­qayyoo kee­ssaa ba’u maraan jiraa­ta malee buddee­ Cuuphamuu Yesuusii na qofaan hin jiraa­tu’ jedhamee 3:13-17 Kwf =&gt; Mar 1:9-11; Luq 3:21, 22; Yoh 1:31-34 barree­ffamee­ra” jedheen. 13 Yommus Yesuus harka 5 Kana boo­ddees Daa­biloos gara Yohaa­nnisii­tti cuu­phamuuf Galii­ magaa­laaj qulqulluu­tti isa gee­ssee laa­dhaa gara Yordaa­nosii dhufe. fii­xee mana qulqullummaa irra 14 Yohaa­nnis garuu, “harka kee­tti dhaa­bachii­se; 6 Akkanas jedheen; cuu­phamuun na barbaa­chisa; “ati yoo ilma Waa­ qayyoo taa­ te ati immoo gara koo dhuftaa?” gadi of darbadhu; jedhee isa dhowwe. Inni, ‘waa­yee kee­tiif malee­kota 15 Yesuu­sis dee­bisee,”ammaaf isaa ni erga; akkanuma haa ta’uu dhii­si; nu Isaan immoo akka ati mii­ qajee­lummaa hundumaa fii­xaan la kee­tiin dhagaa­tti hin baa­suu­dhaaf waan kana gochuu buu­neef; qabnaa­tii” jedheen. Yohaa­nnisis Harka isaa­nii irratti isa dhowwuu dhii­se. si baa­tu’ jedhamee 16 Yesuu­sis akkuma cuu­phameen barree­ffamee­raa­tii.” bishaan kee­ssaa ba’e; innis, sa­ 7 miin banamee, hafuu­ rri Waa­ Yesuu­sis dee­bisee, “ ‘Waa­qa kee qayyoo otoo akkuma gugee­ ttig goo­ fticha hin qorin’ jedhamee gadi bu’uu, isa irras otoo qubatuu barree­ffamee­ra” jedheen. arge. 17 Kunoo, sagalee­ni tokko sa­ 8 Ammas Daa­biloos tulluuk akka mii irraa, “kun ilma kiyya isa ani malee ol dhee­raa tokkotti Yesuu­ jaa­ladhuu dha; isatti baay’ee nan sin ol baa­see moo­tummoo­ta gammada” jedhe. biyya lafaa cufaa fi ulfinna isaa­nii isatti agarsii­se; 9 akkanas jedheen;” Yesuus Qoramuu Isaa yoo ati kufteel naa sagadde, waan 4:1-11 Rwf =&gt; Mar 1:12-13; Luq 4:1-13 kana hundumaa sii­fin kenna.” ‌Ergasiis Yesuus akka Daa­ biloo­ siin qoramuuf Hafuu­ 12 ykn dargaayyee; ​12 ykn Kodhoo / ​gombisaa; ​12 ykn 16 ykn saphaliisaatti / ​handariitti; ​1 ykn onaat­ ra Qulqulluu­dhaan lafa aloo­ttih qola; ​ ti / ​adiyyootti; ​2 ykn duubatti; ​5 ykn dira; ​8 ykn gaara; ​ gee­ffame. 2 Innis erga guyyaa afur­ 9 ykn jidde; miti; inni hafuu­ra qulqulluu fi ibiddaan isin cuu­pha. 12 Inni afar­ saa ittiin midhaan qullee­ssu uf harkaa qaba. Qamadiid isaa goo­ taraa­ttie naquu­dhaan oobdii isaa ni qulqullee­ssa; Habaqiif isaa ga­ ruu ibidda hin dhaa­mneen guba.”
Yesuu­sis, “ati Shee­xana nana, narraa fagaa­dhu! ‘Waa­qayyo waa­qa kee­tiif sagadi; isuma qofa tajaa­jili’m jedhamee barree­ffamee­ raa­tii” jedheen. 11 Yommus Daa­biloos isa dhii­see sokke; malee­konni Waa­qayyoos dhufanii isa tajaa­jilan.
Yesuus Lallaba Jalqabuu isaa
Yesuu­ sis yommuu akka Yo­ haa­nnis qabame dhagayetti Galii­ laa­tti dee­bi’e. 13 Innis Naa­ziree­ tii bahee gara Qifirnaa­hom isii biyya Zaa­biloo­nii­tii fi Niftaa­lemi kee­ssatti qarqara galaa­naa­tti ar­ gamtu sanaa dhaqe, achis jirate. 14 Kunis akka dubbiin karaa Isaa­ yyaas raa­gichaa­tiinn dubbatame sun fii­xa bawuuf ta’e. Dubbichis akkana jedha: 12
“Biyyoo­nni laga Yordaa­nosii gama, daa­ndii gara galaa­naa­tti gee­ ssu irratti argaman, Biyyi Zaa­biloo­nii­tii fi biyyi Niftaa­lemii, Galii­laan namoo­ta ormaas, 16 Uumanni dukkana keessa jiraa­tu, Ifa guddaa argee­ra; Warra biyya gaa­ddidduu du’aa kee­ssa jiraa­tanii­fis, Ifni ba’eera.” 15
4:18-22 kwf =&gt; Mar 1:16-20; Luq 5:2-11; Yoh 1:35-42
Yesuus otoo qarqara galaa­ na Galii­ laa irra dee­ muu, obbolee­ yyan lama jechuu­nis, Simoon isa Phee­xiroos jedhamuu fi obbolee­ ssa isaa Indiriyaa­sin arge; Isaa­ nis qurxummii-qabdoo­ ta waan ta’aniif xaxoo galaa­ natti dar­ bachaa turan. 19 Yesuu­sis,” koo­ttaa na duu­kaa bu’aap; anis qabduu namoo­taa isin godhaa” jedheen. 20 Isaa­nis achumaan xaxoo isaa­nii dhii­sanii isa hordofan. 21 Innis otoo achii ka’ee dee­ muu obbolee­ yyan gara biraaq lama jechuu­ nis Yaa­ qoob ilma Zabdewoo­sii­tii fi obbolee­ssa isaa Yohaa­nnisin arge. Isaa­nis abbaa isaa­nii Zabdewoos waliin xaxoo isaa­nii qophee­ffachaa bidiruur kee­ssa turan; Yesuu­sis isaan waa­ me; 22 Isaa­nis achumaan bidiruu sanaa fi abbaa isaa­nii dhii­sanii isa hordofan. 18
Yesuus Dhukkubsattoota Fayyisuu Isaa
Yesuus manneen sagadaa isaa­ nii kee­ssatti barsii­saa, wangee­la moo­ tummaa lallabaa, dhibee fi dhukkuba hundumaa irraas nama fayyisaa kutaa biyya Galii­ laa hundumaa kee­ssa naa­nna’e. 24 Waa­ yeen isaas Soo­ riyaa cufa 17 Yesuus yeroo sanaa jalqabee, kee­ssatti dhaga’ame; namoo­nnis “Moo­ tummaan samii dhiyaa­ ​ 10 ykn qofaaf hojjadhu; ​14 ykn raajichaatiin; ​17 ykn tee­raa­tii cubbuu irraa dee­bi’aao” qalbii jijjiiradhaa; ​19 ykn na gula deemaa; ​21 ykn jedhee lallabuu­tti ka’e. dhibii / ​ibaa; ​21 ykn hoboloo; 23
dhukkubsattoo­ta garaa garaa, Warri qajee­lummaa­dhaaf warra hafuu­ra jinnii­tiin qabaman, jedhanii gaa­rgalfamanw warra dhukkuba gaggabdoo­ tiin eebbifamoo dha; dhiphatanii fi warra laa­msha’ant Moo­tummaan Waaqaa kan isaa­nii­tii. isatti fidan. Innis isaa­ ni fayyi­ se. 25 Uumanni baay’eenis galii­ 11 “Yommuu namoo­nni waa­yee laa­dhaa, magaa­lawwan kurnanii, koo­ tiif jedhanii isin arrabsan, Yerusaa­lemii, Yihudaa fi Yordaa­ yommuu isin gaa­ rgalchanii fi nos gamaa isa hordofe. yommuu isin irratti dharaan waan Warra Eebbifamoo hamaa cufa dubbatan isin eebbi­ 5:3-12 kwf =&gt; Luq 6:20-23 famoo dha. 12 Gatiin kee­ssani ‌Yesuus yommuu namoo­ ta Waa­qa irratti guddaa waan ta’eef baay’ee argetti, gaa­ratti ol ba­ gammadaa; ililchaas. Isaa­ni raa­ yee taa’e. Barattoo­nni isaas gara jotax isin dura turanis akkanuma isaa dhufan. 2 Innis akkana jedhee gaa­rgalchanii­ruu­tii. isaa­ni barsii­suu jalqabe: s
“Warri hafuu­raan hiyyee­yyii ta’an eebbifamoo dha; Moo­tummaa­ni Waaqaa kan isaa­nii­tii. 4 Warri gaddanu eebbifamoo dha; jajjabee­nna ni argatuu­tii. 5 Warri garraa­miinv eebbifamoo dha; lafa ni dhaa­luu­tii. 6 Warri qajee­llummaa bee­la’anii fi dhee­botan eebbifamoo dha; Isaa­ni ni quu­fuu­tii. 7 Araar-qabee­yyiin eebbifamoo dha; araa­ra ni argatuu­tii. 8 Warri garaan isaa­nii qulqulluu eebbifamoo dha; Waa­qa ni arguu­tii. 9 Warri nagaya buu­sani eebbifamoo dha; Ijoo­llee Waa­qayyoo ni jedhamuu­tii.
Soo­giddaa fi Ifa
“Isin soo­gidday lafaa ti. Garuu soo­giddi yoo miyaa isaa dhabe soo­giddummaa­ni isaa akkamitti dee­ bifamuu danda’a? Gadi ga­ tamee mii­la namaa­tiin dhidhii­ tama malee waa tokkollee hin fayyadu. 14 “Isin ifa biyya lafaa ti. Magaa­ laanz gaa­ ra gubbaa jiru tokko dhokachuu hin danda’u. 15 Namni ibsaa qabsii­see guu­booa jala kaa’u tokkoyyuu hin jiru; Qoo­da kanaa baa­ttuu ibsaa irra dhaa­ba; Ibsaan sunis namoo­ta mana kee­ssa jiran maraaf ibsa. 16 Akka namoo­nni hujii kee­ssan isa gaa­rii arganii Abbaa kee­ssan kan samii irraa­tiif ulfinna kennaniif ifni kee­ssanis
​s24 ykn warra fayyaa hinqabne; t24 ykn naafatan; ​ u w 4 ykn laaleffatan; ​v5 ykn warra gad uf-qaban; ​ 10 ykn x ariyataman / ​baqatan; ​ 12 ykn raagota; ​y13 ykn soodda; ​ z 14 ykn dira; ​a15 ykn Kophaafaa; ​
akkasuma fuu­ la namoo­ taa du­ murtii gumii­tti dhihaa­ta; Nama obbolee­ssa isaa­tiin ‘gowwaa­ ratti haa ifuu. nana’ jedhu immoo ibidda Raawwatamuu Seeraa gahaa­nnamii­ttu isa eegata. 17 “Isin waan ani see­ra Muu­see­tii fi 23 “Kanaaf ati yeroo kennaa kee barsii­sa raa­gotaa cabsuu dhufe hin iddoo aarsaa­ttid dhiyee­ssitutti yoo se’inaa; ani isaan raa­wwachuuf b akka obbolee­ssi kee komii sirraa malee cabsuuf hin dhufne. 18 Ani qabu yaa­dattee, 24 Kennaa kee achu­ dhuguman isinitti hima; hanga sa­ ma iddoo aarsaa duratti dhii­sii mii fi lafti dabranitti see­rri sun guu­ dhaqii­tii duraan dursii obbolee­ssa tummaa­tti raa­wwatama malee see­ kee­tti araa­rami; eegasiis koo­ttuu­tii richa kee­ssaa qubeen tokkollee­ni kennaa kee dhiyee­ssi. yoo­kaan tuqaan xiqqoon ishii­lleen 25 “Dii­naf kee isa mana murtii­tti matumaac hin baddu. 19 Kanaaf si gee­ssaa jirutti dafii araa­rami, namni ajajawwan kanneen kee­ssaa yoo kanaa achii inni dabarsee diqqaa isaa­llee cabsu, kan akka abbaa see­raa­tti si kenna. Abbaan warri kaa­ nis cabsaniif barsii­ su see­raa immoo waa­rdiyaa­ttig si kamiyyuu moo­tummaa waa­qaa kenna; atis mana hidhaa kee­ssa kee­ssatti xiqqaa jedhama. Namni buu­famta. 26 Ani dhuguman sitti ajajawwan kanneen eeguu fi kan hima; ati hanga bee­ssee isii dhu­ warra kaa­nis barsii­su kamiyyuu maa baa­ftutti matumaa achii hin garuu moo­tummaa waa­qaa baa­tu. kee­ssatti guddaa jedhama. 20 Ani Ejja isinittin hima; yoo qajee­lummaa­ni 27 kee­ssan qajee­lummaa Farii­sotaa­tii “Akka, ‘hin ejjinh’ jedhame fi qajee­llummaa barsii­stota see­raa dhagee­ttanii­rtu. 28 Ani garuu isi­ caa­luu baa­te isin moo­tummaa nittin hima; namni dharraa­dhaan dubartiii ilaa­le martinuu yaa­da waa­qaa­tti hin galtan. isaa­tti ishii waliin ejjee­ra. 29 Yoo Nama Ajjeesuu iji keej kan mirgaa cubbuu si 5:25, 26 kwf =&gt; Luq 12:58, 59 hojjachii­se, uf-kee­ssaa baa­sii 21 tummaa­ tti “Akka namoo­ta durii­tiin, ‘hin gati; nafni kee guu­ ajjee­ sinaa, nama nama ajjee­ gahaa­nnamitti gatamuu irra, ku­ setti ni muramaa’ jedhame dha­ taa nafa kee­tii kee­ssaa tokko dha­ gee­ssanii­rtu. 22 Ani garuu isinittin buu sii wayyaa­tii. 30 Yoo harki kee him; nama obbolee­ ssa isaa­ tti kan mirgaa cubbuu si hojjachii­se, dhee­ kkamu hundumaa murtii­ 17 ykn guutuuf; ​18 ykn akkanallee jedhee; ​23 ykn fulaa sooriyootti; ​23 ykn qaabatte; ​25 ykn nya­ ttu eegata; Namni obbolee­ ssa aphakee; ​ 25 ykn eedduutti; ​27 ykn hin hawadatin; ​ isaa­ tiin ‘raa­ tuu’ jedhu cuftis 28 ykn nadheeni; ​29 ykn iltii tee; ​ b
of-irraa kutii gati; nafni ni kee guu­tummaa­tti gahaa­nnamitti gatamuu irra, kutaa nafa kee­ tii kee­ ssaa tokko dhabuu si wayyaa­ttii. Wal-hiikuu Dhiirsaa Fi Niitii
“Namni nii­tii isaa hii­ku hundi, ‘ragaa hii­ kkaa kan barree­ ffame haa kennuu­fii’ jedhamee­ra. 32 Ani garuu isinitti nan hima; namni otoo isiin hin ejjin nii­tii isaa hii­ ku kamiyyuu akka isiin ejjitu godha. Namni dubartii hii­kamte fuu­dhus ni ejja. 31
“Ammas akka namoo­ ta durii­ tiin, ‘waan kakatte goo­ftaa­dhaaf raa­wwadhu malee dharaan hin kakatin’ jedhame dhagee­ssanii­rtu. 34 Ani garuu isinittin hima; matu­ maa hin kakatinaa; Samii­dhaan hin kakatinaa; inni tee­ssoo Waa­ qayyoo­tii; 35 Yoo­ kiin lafaan hin kakatinaa; ishiin ejjeta mii­ la isaa­tii yoo­kiin Yerusaa­lemiin hin kakatinaa; ishii­ni magaa­laa moo­ ticha guddaa­tii. 36 Mataa kee­tii­nis hin kakatin; rifee­ nsa tokkollee addee­ssuu yoo­kaan gurraa­chesuu hin dandee­ttuu­tii; 37 Garuu, ‘ee­ yeen’ kee­ ssan ‘eeyee’, ‘waa­ wuu­ nik’ kee­ssan immoo ‘waa­wuu’ haa ta’uu; Wonni kanaa achii hundi­ nuu isa hamaa sana irraa dhufa.
nii immoo ilkaan’ akka jedhame dhagee­ttanii­rtu. 39 Ani garuu isi­ nittin hima. Nama hamaaf waan hamaa hin dee­bisinaa; Yoo nam­ ni tokko maddii kee isa mirgaal si kabalem, isa bitaasn itti garagalchi. 40 Yoo namni tokko si himatee kittaao kee sirraa fudhate, koo­tii kees kenniif. 41 Namni tokko akka ati gara kii­loo mee­tira tokkoo fi walakkaa isa wajjiin dee­mtu yoo si dirqisii­sep, ati immoo gara kii­ loo mee­tira sadii isa wajjiin dee­ mi. 42 Nama waa si kadhatuuf kenni; Isa sirraa liqee­ ffachuu barbaa­dus hin dhowwatin. Diina Jaalachuu
Gatii Ijaa, Ija Baasuu
“ ‘Qoo­da ijaa, ija; qoo­da ilkaa­
“ ‘Ollaaq kee jaa­ladhu; Dii­na kee jibbi’ akka jedhame dhagee­ssanii­ rtu. 44 Ani garuu isinittin hima; dii­nota kee­ssan jaa­ladhaa; Warra isin gaa­rgalchanii­fis Waa­qa kadhadhaa. 45 Yoo kana goo­ tan isin Abbaa kee­ ssan kan samii irraa­ tiif ijoo­ llee ni taa­ tu. Inni warra hamaa fi warra gaa­rii­dhaaf aduu isaa ni baa­sa. Bokkaa isaas qajee­ ltotaa fi jalloo­ taaf ni roo­ bsa. 46 Isin yoo warra isin jaa­latan qofa jaa­lattan gatii maa­lii argattu? Kana ammoo walitti qabdoo­nni qaraxaa­ yyuu ni godhuu mitii? 47 Isin yoo obbolee­yyan kee­ssan qofa nagaya gaa­ fattanr waan hujii warra kaa­ nii caa­ lu maal 43
k 37 ykn hiyyooni; ​l39 ykn mirgicha; ​m39 ykn dhabanaa­ se; ​n39 ykn bitaachallee; ​o40 ykn ubbaara; ​p41 ykn humnaan deemsiisuu jechuu; ​q43 ykn ­hiriyyaa; r47 ykn nagaya fuutan; ​
hojjachuu­tti jirtu? Kana immoo namoo­nni ormaa­yyuu ni godhuu mitii? 48 Akkuma Abbaan kee­ssani inni samii irraa mudaas hin qab­ ne sana, isinis warra mudaa hin qabne ta’aa.
Rakkataaf Waa Kennuu
batanii Waa­ qa kadhachuu jaa­latuu­tii. Dhuguman isi­ nitti hima. Isaan gatii isaa­ nii argatanii­ru. 6 Ati garuu yeroo Waa­qa kadhattu mana kee­tti ol gali; balbala cufadhu; Abbaa kee isa bakkau dhossaa jiru sana kadhadhu; Abbaan kee inni waan dhossaa­ dhaan hojjatamu argu sun muldhii­nnaan gatii sii kenna. 7 Isinis yommuu Waa­ qa kadhattan akka namoo­ta ormaa dubbii faa­ yidaa hinqabne irra hin deddee­ bi’inaa. Isaan baa­ yinna dubbii isaa­ nii­ tiin waan isaa­niif dhaga’amu se’u. 8 Abbaa­ ni kee­ssan otuma isin hin kadha­ tiniyyuu waan isin barbaa­chisu waan bee­kuuf isin akka isaa­nii hin ta’inaa.
‌”Akka isaan isin arganiif jettanii ‘hujii qajee­ lummaa’ kee­ssan fuu­la namoo­taa duratti akka hin hojjanneef of eegadhaa; Yoo akkas goo­tan Abbaa kee­ssan kan samii irraa biraa gatii hin qabaa­ttanii­tii. 2 “Kanaaf ati yommuu warra rakkataniif waa kennitutti akka fakkee­ssitoo­nni namoo­ta biratti jajamuuf jedhanii manneen sa­ gadaa kee­ ssattii fi karaa irratti godhan sana magalataant hin 9 Eegaa akkana jedhaa labsatin; Ani dhuguman isinitti kadhadhaa: hima; Isaan gatii isaa­nii 3 Yeroo “ ‘Yaa Abbaa kee­nya kan samii ati rakkattoo­taaf waa kennitutti irra jirtu; garuu waan harki kee kan mirgaa Maqaa­ni kee haa qulqullaa’uu; godhu, harki kee kan bitaa hin 10 Moo­tummaa­ni kee haa dhufuu; bee­kin. 4 Kunis akka kennaan kee Fedhii­ni kee akkuma samii dhossaan ta’uuf; Abbaan kee inni irratti ta’e sana waan dhossaa­ dhaan hojjatamu Lafa irrattis haa ta’uu. argu sun muldhinnaan gatii sii 11 Soo­ra kee­nna kan guyyuma kenna. guyyaan nu barbaa­chisu hardha nu kenni. Kadhannaa 12 Akkuma nu warra hammee­nna 6:9-13 kwf =&gt; Luq 11:2-4 nutti hojjataniif dhii­fnuv 5 “Isin yommuu Waa­qa kadhattan Atis hammee­nna kee­nya nuu akka fakkee­ssitoo­taa hin ta’inaa. dhii­si. Isaa­ni namaa­tti muldhachuuf jedhanii manneen sagadaa 48 ykn hirdhinna; ​2 ykn xurumbaan; ​6 ykn fulaa / ​ kee­ ssaa fi qarqara karaa dhaa­ iddoo; ​12 ykn haraaramnu; ​ s
Isa hamaa irraa nu oolchi malee Qoramatti nu hin galchin; moo­tummaa­ni, humni, ulfinnis barabaraan kan kee­ti; aamiin.’
Yoo isin namoo­taaf yakka isaa­ nii dhii­ftan, Abbaan kee­ssan inni samii irraas akkasuma isiniif ni dhii­saa­tii. 15 Yoo isin namoo­taaf yakka isaa­nii dhii­suu baa­ttan ga­ ruu Abbaan kee­ssanis akkasuma yakka kee­ssan isiniif hin dhii­su. 14
“ Isin yommuu soo­ m tanitti akka fakkee­s sitoo­t aa fuu­l a hin dukkanee­ f fatinaa; Isaan akka soo­ muu­ tti jiran agarsii­ fachuuf jedhanii fuu­la isaa­nii hammee­ssuw. Dhuguman isi­ nitti hima; Isaan gatii isaa­ nii argatanii­ru. 17 Ati garuu yeroo soo­mtu ma­ taa kee dibadhu; Fuu­la kees dhi­ qadhu. 18 Kunis akka soo­muu kee sana Abbaa kee isa namatti hin muldhanne malee namni hin bee­nnee­fii­dha. Abbaan kee inni waan dhossaa­ dhaan hojjatamu argu gatii kee sii baa­sa. 16
hin ballee­ ssinee fi bakka itti hattuun cabsitee hin hanne sa­ mii irratti badhaa­dhummaa ufii kee­ssaniif kuu­fadhaa. 21 Bakkuma badhaa­dhummaan kee jiru sana garaa­ni kee jiraa­tii. 22 “Ibsaa­ ni nafaa Ija;y Iji kee fayyaa taa­ naan, nafni kee guu­ tuun ifa qaba. 23 Yoo Iji kee fayyaa hin ta’in garuu, nafni kee guu­ tuu­ ni ni dukkanaa’a; Erga ifni si kee­ssa jiru sun dukkanaa’ee, dukkanni sun hagam haa jabaa­ tuu ree! 24 “Namni goo­ ftaa lama tajaa­ jiluuz danda’u tokkollee­ ni hin jiru; Goo­ ftaa isa tokko jibbee isa kaan jaa­lataa­tii; yoo­kaan isa tokko kabajeea isa kaan immoo tuffata. Isinis akkasuma Waa­ qaa fi maa­llaqab tajaa­jiluu hin dandee­ssan. Hin yaadda’inaa 6:25-33 kwf =&gt; luq 12:22-31
“Kanaaf ani isinittin hima; ‘Maal nyaa­ nna yoo­ kiin maal dhunna?’ jettanii waa­ yee jiree­ nya kee­ ssanii hin yaa­ dda’inaa; Yoo­kiin ‘maal uffanna?’ jettanii waa­ yee nafa kee­ ssanii hin yaa­ Badhaadhummaa Samii Irraa dda’inaa. Jiree­ nni nyaa­ ta hin 6:22-23 kwf =&gt; Luq 11:34-36 caa­ luu? Nafnis uffata hin caa­ 19 “Isin bakka itti daa­ nawoo fi luu? 26 Mee simbirroo­tac qillee­nsa x biliin ballee­ssituu fi bakka itti irraa ilaa­laa! Isaan hin facaa­san hattuun cabsitee saa­ mtu lafa yoo­kaan hin haa­man yoo­kaan irratti badhaa­ dhummaa ufii 16 ykn boosomsu; ​19 ykn dholdholeeni; ​22 ykn ila; ​ kee­ssaniif hin kuu­fatinaa. 20 Ga­ 24 ykn jala hojjachuu; ​24 ykn ulfinna kenneefii; ​ ruu bakka itti daa­noon nyaa­ttee 24 ykn beessee; ​26 ykn simphirree; 25
cuftinuu, fagaa­tanii ni dhaa­batu. Isaan yommuu aara gubamuu isii arganitti, ‘magaa­ laan akka magaa­laa guddittii tanaa takku­ maa turee­raa ree?’ jedhanii iyyani. 19 Isaa­nis awwaa­ra mataa­tti firfir­ fatanii boo’aa, gaddaas akkana jedhanii iyyani; 18
“ ‘woyyoo! Woyyoo, yaa magaa­ lattii guddoo, yaa isii warri galaa­na irraa hoboloo qaban martinuu qabee­nna isii­tiin duroo­mani, isiin sa’aatuma tokko kee­ssatti barbadoo­fte! 2 0 Yaa samii kufaa­tii isii­tti gammadi! qulqulloo­nni, ergamtoo­nnii fi raa­gonnism gammadaa! Waa­qayyo haa­loon isinii bahee isii­tti muree­raa­tii.’ “ Yommus malee­kaan jabaan tokko dhagaa haga dhagaa daa­kuu gawu tokko fuu­dhee galaa­natti gadi darbate; akkanas jedhe:
“Baa­biloon magaa­lattiin guddoon, akkasuma furgugifamtee ni darbatamti; matumaas dee­bitee hin argamtu. 2 2 Qoo­nqi warra kiraa­ra dhawanii­ tii fi warra muu­ziqaa taphatanii, qoo­nqi warra ulullee afuu­ fanii­tii fi warra magalatao
afuu­fanii ammaan achi si kee­ssatti hin dhaga’amu; ogee­ssi ogummaa hujii harkaa tokkolleen, ammaan achi si kee­ssatti hin argamu; qoo­nqi dhagaa daa­kuu­lleen, ammaan achi si kee­ssatti hin dhaga’amu. 2 3 Ifni ibsaa, Lammata si kee­ssatti hin ifu; sagaleen dhii­rsa misirroo­tiip fi sagaleen misirrooq, lammata si kee­ssatti hin dhagayamu. daldaltoo­nni kee namoo­ta gugurdaa addunyaa turan; falfala kee­tiin sabni cuftinuu gowwoo­mfamee­ra. 2 4 Dhii­gni raa­jotaa­tii fi dhii­gni qulqulloo­taa, dhii­gni warra lafa irratti gorra’aman hundumaas ishii kee­ssatti argame.”
‌ ana boo­ddeer waan akka K huu­rsaa qoo­nqas tuu­ta na­ moo­taa guddaa tokko samii irraa nan dhagaye; innis akkana jedha: “Haa­llee Luu­yaa! Fayyinni, ulfinnii fi humni kan Waa­qa kee­nnaa ti; 2 Murtiin isaa dhugaa dhaa­tii; 20 ykn raajonnis; ​n20 ykn haluu; ​o22 ykn xurumbaa; ​ q 23 ykn Abbaa fuudhaa / ​ashilaa; ​ 23 ykn intala fuudhani / ​idaayyaa; ​r1 ykn duubatti; ​s1 ykn qoonqoo / ​ sagalee; ​ m p
qajee­laa­dhas. Inni sagaa­galtittiit guddoo, isii sagaa­gala isii­tiin lafa xuree­ssite sanatti muree­ra; dhii­ga tajaa­jiltoo­tau isaa­tii­fis isii­tti haa­loov bayee­ra. Ammas ida’anii,
Yeroon fuu­dha hoo­lichaa gayee­raa­tii; misirroony isaas uf-qophee­ssitee­rti. 8 Akka uffattuu­fis uffanni haphiin quncee talbaa irraa hojjatame, Adii fi qulqulluun isiif kennamee­ra.”
“Haa­llee luu­yaa! Aarri ishiis baraa hanga bara Uffanni haphiin Quncee tal­ baraa­tti olni ba’a” jedhanii baa irraa hojjatame sun hujii iyyani. qulqulloo­ taa isa qajee­ laa sana 4 Jaa­rsonni diddamii afranii fi uu­ agarsii­sa. mamawwan jiraa­toon afran kufa­ 9 Malee­kaan sunis, “ ‘Warri gara niiw Waa­qa tee­ssoo irra taa’ee jiru cidhaz fuu­dha hoo­lichaa­tti affee­ sanaaf sagadani; sagalee guddaa­ ramana eebbifamoo dha’ jedhii nis “Aamiin; Haa­ llee luu­ yaa!” barree­ssi” naan jedhe; itti ida’ees, jedhani. “Dubbiin kun dubbii Waa­qaa isa 5 dhugaa dha” naan jedhe. Yommus qoo­nqi, 10 Anis isaaf sagaduuf jedhee “Isin tajaa­jiltoo­nni isaa cuftinuu, mii­la isaa irratti lafa dhaye; inni warri isa sodaa­ttan, garuu akkana naan jedhe; “Naa diqqaa­nis guddaa­nis, hin sagadini! anis hojjatumaa Waa­qa kee­nya jajadhaa” jedhu sii fi obbolee­yyan kee warra Ye­ tokko tee­ssicha kee­ssaa suu siif dhuga-bahanb wajjiin bahe. tajaa­jiluu dha. Waa­qaaf sagadi; 6 Otoo sagaleen akka sagalee tuu­ dhuga-bayii­nsi Yesuu­sii hafuu­rac ta nama baa­ yee, akka huu­ rsaa raa­jii­tiid. bisaan baay’eetii fi akka sagalee Nama Farda Adii Irra Taa’u mandii­suux guddaan tokko akka­ 11 na jedhuu nan dhagaye: Anis samii baname nan arge; kunoo, farda adii tokkottu ture. “Haa­llee luu­yaa! Inni farda sana yaa­bbatus ama­ Goo­ftaan kee­nna Waa­ namaa fi dhugaa jedhama ture; qni waan mara danda’u moo’eeraa­tii; 2 ykn hawadattuu; ​2 ykn hojjatoota; ​2 ykn haluu; ​ 7 Koo­ttaa ni gammannaa; ni 4 ykn jiganii; ​6 ykn kakawwee / ​bakakkaa; ​7 ykn ida­ ayyaan / ​intalli inni fuudhu; ​9 ykn jila; ​9 ykn yaama­ ililchinas; man; ​10 ykn dhugeessan / ​rageessan; ​10 ykn ayyaana; ​ ulfinnas isaaf ni kenninaa! 10 ykn himanaati / ​dubbii raagaati; ​ t
innis qajee­ lummaan murtee­ ssa; waraa­ nas ni kaa­ sa. 12 Ijjie isaa akka arraba ibiddaa ti; ma­ taa isaa irras gonfoof baay’eettu jira; innis maqaa isa irratti barree­ffame kan isa malee nam­ ni tokkolleen hin bee­nne tokko qaba. 13 Innis uffata dhii­ga kee­ ssa cuu­phame tokko uffata; ma­ qaan isaas “Dubbii Waa­qayyoo” jedhama. 14 Loltoo­n ni samii irraas uffata haphii quncee tal­ baa irraa hojjatame adaa­dii fi qulqulluu uffatanii, fardoo­leeg adaa­dii yaa­bbatanii isa hordo­ faa turani. 15 Afaan isaa kee­ssaas goraa­ dee qaramaa inni ittiin saboo­ta rukutuh tokkottu baya; “Innis bokkuu sibii­laa­tiin isaan bulcha;” bakkai cunfaa wayinii dhee­kkamsa sodaa­chisaa Waa­ qa waan cufa danda’uu sanaas ni dhidhii­ta. 16 Innis uffata isaa­ tii fi gudee­da isaa irratti maqaa barree­ ffame tokko qaba; ma­ qaan sunis akkana jedha; “Moo­tii moo­totaa­tii fi Goo­ftaa goo­ftotaa”
foon fardoo­lee­tii fi foon warra farda yaa­ bbatanii akkasumas foon nama maraa jechuu­ nis foon nama bilisam ta’eetii fi gar­ baa, foon diqqaa­tii fi guddaa nyaa­ttanii­fi.” 19 Yommuu sanas binee­ nsichi, moo­tonni lafaa­tii fi loltoo­nni isaa­nii namicha farda yaa­bbatu sanaa fi loltoo­ta isaa­tti waraa­na kaa­suuf jedhanii otoo walitti qa­ bamanuu nan arge. 20 Binee­nsichi garuu ni qabame; raa­gichi dharaa kan fuu­la binee­ nsichaa duratti hujii­wwan baa­saa hojjachaa ture sunis isa waliin qabame. Innis hujii­ wwan baa­ saa kannii­ niin warra milikkee­ tan binee­ nsichaa fudhatanii fi warra fakkii isaa­ tiif sagadan go­ wwoo­ mse; isaan lachuu otu­ ma lubbuun jiranuu haroo ibi­ddaa kan dinyii­dhaano bo­ bawu kee­ssatti gadi darbatamani. 21 Warri hafan ammoo goraa­dee afaan namicha farda yaa­ bbatu sanaa kee­ssaa bayeen ajjee­faman; allaa­ttiin cuftinuus foon isaa­nii nyaa­ttee quu­fte.
Malee­ kaa tokkos otoo inni Mootummaa Woggaa kumaa aduu kee­ ssa dhaa­ batuu nan arge; innis qoo­ nqa guddaan ‌Otoo malee­ kaan tokko simbirroo­taj samii wadhakkaak furtuu qilee­tii fi foo­ncaap barrisanitti akkana jedhee guddaa tokko harkatti qabatee iyye; “Koo­ttaa, irbaa­tal Waa­qaa samii irraa gadi bu’uu nan arge. isa guddaaf walitti qabamaa. 12 ykn iltii; ​12 ykn ruufa; ​14 ykn faradoo / ​fardeen; ​ 18 Kunis akka isin foon moo­ 15 ykn dhawu; ​15 ykn fulaa; ​17 ykn simphirree; ​ 17 ykn walakkaa; ​17 ykn golola halkanii; ​18 ykn bal­ totaa, foon ajajjoo­ ta waraa­ chaa; ​ 20 ykn malkata; ​20 ykn dilloon bobeettu; ​1 ykn naa, foon namoo­ ta jajjaboo, haadha sibiilaa / ​birbiraata; ​ 17
Malee­kaan sunis binee­nsicha akka jawwee, bofa durii sana jechuu­nis daa­biloos yoo­kaan Shee­ xana qabee woggaa kuma tokkoof hidhe. 3 Haga waggaan kumaa sun dhumuttis akka inni dee­ bi’ee saboo­ ta hin gowwoo­ msineef qilee­tti gadi isa darbatee itti cufe. Chaa­ppaas irratti godhe; ergasii immoo yeroo gabaa­baaf hii­kamuu qaba. 4 Anis tee­ssowwan tokko tokko nan arge; warri akka murtii kennaniif aangoonq kennameef tee­ ssowwan sana irra taa’anii turani. Lubbuu­wwan namoo­ta sababii Yesuu­siif dhugee­ssanii fi sababii dubbii Waa­ qayyoo­ tiif jedhanii gorra’amaniis nan arge; isaa­nis binee­nsichaaf yoo­ kiin fakkii binee­nsichaa­tiif hin saganne; milikkee­tar isaas adda isaa­nii irratti yoo­kiin harka isaa­ nii irratti hin fudhanne; isaa­nis du’aa ka’anii Kiristoos waliin waggaa kuma tokkoo moo’an. 5 Warri du’anii otoo du’aa hin ka’in hafan garuu haga waggaan kumaa sun dhumutti du’aa -ka’iinsa hin arganne; kunis du’aa-ka’iinsa jalqabaa­ti. 6 Warri du’aa-ka’iinsa jalqabaa kee­ssatti qoo­ da qaban eebbifamoo fi qulqulloo­ t a. Warri akkasii luboo­tas Waa­qayyoo­tii fi luboo­ta Kiristoo­sii ta’anii woggaa kuma tokkoo isa woliin moo­wu malee duu­ti lammaffaan isaan irratti humna hin qabu.
Yommuu waggaan kumni sun dhumutti shee­ xanni bakkat itti hidhamee ture kee­ssaa gadi dhii­ fama. 8 Innis saboo­ta goleeu lafaa afran jiran jechuu­ nis Goo­ gii fi Maa­goo­gin gowwomsuuf ni baha; hunduma isaa­niis waraa­naaf wo­ litti qaba; baa­yinni isaa­niis akka baay’inna cirracha qarqara galaa­ naa­ti. 9 Isaa­ nis lafa cufa irratti faffaca’anii buu­ fata qulqulloo­ taa­tii fi magaa­lattiiv jaa­latamtuu marsani; garuu ibiddi samii irraa gadi bu’ee isaan fixe. 10 Daa­biloos inni isaan gowwoo­mse sunis gara hara dinyiiw boba’uutti bakka binee­nsichii fi raa­gichix dha­ raa itti darbataman sanatti gadi darbatame. Isaa­nis baraa hanga bara baraa­tti halkanii guyyaa ni dhiphifamu.
Anis tee­ssoo adii guddaa tokkoo fi isa tee­ssicha irra taa’e nan arge; laftii fi samiin fuu­la isaa duraa baqatani; bakkis isaa­niif hin ar­ gamne. 12 Warri du’anis xiqqaa guddaan fuu­ la tee­ ssichaa dura dhaa­ batanii nan arge; kitaa­ bonnis ni banamani; akkasu­ mas kitaa­bni dhibiiny jechuu­nis kitaa­ bni jiree­ nnaa ni baname; Warra du’anis akkuma kitaa­bota kee­ssatti galmee­ffametti, akku­ 11
4 ykn guddinnii; ​r4 ykn malkata; ​s6 ykn qaallolee; ​ 7 ykn fulaa; ​u8 ykn roga; ​v9 ykn dira; ​w10 ykn dilloo; ​ x 10 ykn raajichi; ​y12 ykn biraa; ​
ma hujii isaan durii hojjatanii­tti murtiin kennameef. 13 Galaa­nnis warra du’an kanneen isa kee­ssa turan uf kee­ssaa baa­see kenne; duu­ tii fi Si’oolis warra du’an kanneen isaan kee­ ssa turan uf kee­ssaa baa­sanii kennani; nam­ ni cuftis akkuma hujii isaa­ tti murtii argate. 14 Eegasiis duu­tii fi Si’ool hara ibiddaa­tti gadi darba­ tamani; harri ibiddaa kunis du’a lammaffaa dha. 15 Namni maqaan isaa kitaa­ba jiree­nyaa kee­ssatti hin galmee­ffamin kamiyyuu hara ibiddaa­tti gadi darbatame. Yerusaalem Ishii Haaraya
‌Anis eegasii samii haa­rayaa fi lafa haa­ raya nan arge; samiin duraa­tii fi lafti duraa sun badanii­ruu­tii; galaa­nnis lammata dee­bi’ee hin argamne. 2 Anis otoo magaa­lattiinz qulqulluun jechuu­ nis Yeruu­saa­lem ishiin haa­rayii akkuma misirrooa dhii­ rsa ishii­ tiif midhaa­ffamtee­tti qophoo­ftee samii kee­ ssaa Waa­ qayyo biraa gadi buu­tuu nan arge. 3 Sagaleeb guddaa tee­ssoo kee­ssaa akkana jedhu tokkos nan dhaga’e; “Ku­ noo, bakkiic Waa­qayyo jiraa­tu namoo­ta jidduu dha; innis isaan wajjiin jiraa­ ta. Isaan saba isaa ta’u; Waa­ qayyo mataan isaas isaan wajjiin ni jiraa­ ta; Waa­ qa isaa­niis ni ta’a. 4 Inni imimmaan hunda ijad isaa­nii irraa ni haa­ qa; ammaan achi duu­ti yoo­kiin gaddie yoo­kiin boo­yichi yoo­kiin
dhiphinni tokkolleen hin jiraa­tu; sirni moo­faanf sun dabree­raa­tii” 5 Inni tee­ ssoo sana irra taa’es, “Kunoo, ani waan hunda nan haa­ romsa” jedhe; itti ida’ees, “Dubbiin kun waan amanamaa fi dhugaa ta’eef, kana barree­ssi” naan jedhe. 6 Innis akkana naan jedhe; “Raa­wwatamee­rag; Alfaa fi Omee­ gaan, jalqabaa fi dhumni ana; ani nama dhee­botu maraaf bur­ qaa bisaan jiree­nnaa irraa tola nan kennaaf. 7 Namni injifatuh kamiyyuu waan kana mara ni dhaa­la; ani Waa­qa isaa nan ta’a; innis ilma kiyya ta’a. 8 Garuu qoo­ dni dabee­yyii, kan warra aman­ tiii hin qabnee, kan xuraa­wotaa, kan warra nama ajjee­ssanii, kan halalee­wwaniij, kan warra falfa­ la hojjatanii, kan warra Waa­qota tolfamoo Waa­qeffatanii­tii fi kan sobduu­wwan cufaa hara ibiddaa­ tii fi dinyiik bobawuu kee­ssa ta’a; kunis du’a lammaffaa dha.” 9 Malee­kota torban warra wocii­ tiil torban dhayicham dhumaa torbaniin guu­ taman qaban kee­ssaas inni tokko dhufee, “Koo­ ttu, misirrittii jechuu­ nis nii­ tii hoo­lichaaa sitti nan agarsii­saa­tii” naan jedhe. 10 Innis hafuu­raan na fuu­dhee gaa­ra guddaa fi dhee­raa z b 2 ykn dirii; ​a2 ykn intala fuudhaa / ​idaayyaa; ​ 3 ykn c qoonqa / ​qoonqoo; ​ 3 ykn fulaan; ​d4 ykn ila; ​e4 ykn la­ g alatii; ​f4 ykn seerrii dullachi; ​ 6 ykn yaa guutame / ​ xummurame; ​h7 ykn dabsatu; ​i8 ykn dhugeeffachaa; ​ j 8 ykn sharmuuxotaa; ​k8 ykn dilloo; ​l9 ykn qorii / ​gaba­ tee; ​m9 ykn balaa; ​
tokkoo­tti na gee­sse; otoo magaa­ lattiin qulqulluun jechuu­ nis Yerusaa­lemi samii kee­ssaa waa­qa biraa gadi buu­tuu natti agarsii­se; 11 Isii­nis ulfinna Waa­qayyoo­tiin ni ibsiti turte; calaqqifnin ifa isiis akkuma calaqqisa dhagaa gatii guddaa, akka dhagaa Yaa­siphii­ di qulqulluu akka bilillee ture. 12 Magaa­lattii­nis masaraao guddaa fi ol dhee­raa karra kudhanii lama qabu qabdi turte; Karrawwan sana irras malee­ kota kudhanii lamattu dhaa­ batee ture; karra kudhanii lamaan sana irrattis maqaan gosa Israa’elii kudhanii lamaa­nii barree­ffamee ture. 13 Ka­ raa ba’a bii­ftuu karra sadii, karaa kaa­baap karra sadii, karaa kibbaaq karra sadii, karaa lixa bii­ ftuus karra sadii­ ttu ture. 14 Masaraan magaa­lattiis hundeer kudhanii lama qaba ture; hundee­ wwan sana irrattis maqaan ergamtoo­ ta hoo­lichaa kudhanii lamaa­nii barree­ffamee ture. 15 Malee­kaan natti dubbate sunis magaa­lattii, karrawwan isii­tii fi masaraa­wwan isii safaruuf ulee safaraas kan worqii irraa hojjata­ me qaba ture. 16 Magaa­lattii­nis go­ leet afurii qabdi turte. Dhee­rinni ishii­tii fi garaan ishii wol-qixxee
ture. Malee­kaan sunis ulee isaa­ tiin magaa­lattii safareu; baldhinni ishiis gara kii­loo mee­tira kuma lamaa fi dhibba lamaa ta’e; dhee­rinni ishii, garaan ishii­tii fi ol-dhee­ rinni ishiis wol-qixxee ture. 17 Masaraa magaa­ lattiis ni safare; innis akka safara namaa kan malee­kichi ittiin safaraa ture sanaa­tti ciqilee dhibba tokko fi afurtamii afuri ta’e. 18 Masarichi dhagaa Yaa­siphidii­tiin ijaa­rame; magaa­lattiin ammoo worqii qul­ qulluu akka daa­wwitiiv qulqulluu ta’een ijaa­ramte. 19 Hundee­wwan masaraa magaa­ lattiis dhagaa gatii-guddaa gosa hundumaa­tiin midhaa­ffamani. Hundeen jalqa­ baa Yaa­siphii­diin, lammaffaan sanphee­ riin, sadaffaan kaa­ lqedoo­ niin, afraffaan immoo imeraa­ldiin midhaa­ffame. 20 Inni shanaffaan Sardoo­ niksiin, ja­ haffaan Sardiyoo­niin, torbaffaan Kirisalii­xoo­siin, saddee­ttaffaan bee­riloo­siin, saglaffaan Tophaa­ zii­yoo­niin, ku­dha­na­ffaan Ki­ ri­so­phi­raa­soo­siin, kudhanii to­kko­ffaan Yaa­kin­tiin, kudhanii n p 11 ykn billiqqeessii; ​o12 ykn dallaya dhagaa; ​ 13 ykn q mirgaa; ​ 13 ykn bitaa; ​r14 ykn yayyaba; ​s15 ykn mada­ t u v allii; ​16 ykn moggaa; ​16 ykn dhundhume; ​18 ykn ufilaalii; ​
21:19 Sanpheer – dhagaa gatii guddaa kan bifa cuquliisaa qabu. ​Kaalqedoon (Ageeti) – dhagaa gatii guddaa kan bifa adda addaa, yeroo baay’ee magariisaa (hadhoo). ​Imeraald – dhagaa magariisa gatii
21:20 Sardooniksi – dhagaa gatii guddaa kan bifa adda addaa, yeroo baay’ee diimaa. ​Sardiyoon – dha­ gaa gatii guddaa kan yeroo baay’ee diimaa. ​Kirisooliit – dhagaa warqii fakkaatu. ​Beeriloos – yeroo baay’ee bifa cuquliisa akka magariisaati akkasumas bifa adda addaa qaba. ​Tophaaziyoon – yeroo baay’ee biftii isaa keelloo fakkaata. ​Kirisoophiraasos – dhagaa magariisa. ​Yaakinti – dhagaa diimaa burtukaa­ na fakkaatu. ​Ameetisxoos – dhagaa dhiilgee yookaan gurraacha.
lammaffaan immoo Amee­tisxoo­ siin midhaa­ffame. 21 Karri kudha­ nii lamaan lulaw kudhanii lama turan; tokkoon tokkoon karra sa­ naas lulaan hojjatame. Daa­ndiin magaa­ lattiis worqii qulqulluu akkuma daa­wwitii waa muldhi­ suu ti. 22 Waa­qni Goo­ftaan waan hunda danda’uu fi hoo­lichi mana qul­ qullummaa isii waan ta’aniif ani magaa­lattii kee­ssatti mana qul­ qullummaa tokkollee hin argine. 23 Bii­ ftuun yoo­ kaan ji’i magaa­ lattiif ibsuun hin barbaa­chisu; ul­ finni Waa­qayyoo ifa kennaa­fii­tii; hoo­lichis ibsaa ishii­ti. 24 Saboo­ nni ifa isii­ tiin dedee­ bi’u; moo­ tonni lafaas ulfinna isaa­nii gara isii­tti fidu. 25 Sababii halkan achi hin jirreef karrawwan magaa­lattii matumaax guyyaan hin cufama­ ni. 26 Ulfinnaa fi surraay saboo­taa gara ishii ni fidu. 27 Worra maqaan isaa­nii kitaa­ba jiree­nnaa kan hoo­ lichaa kee­ssatti galmee­ffame ma­ lee wonni xuraa­waan tokkoyyuu yoo­kaan namni waan jibbisii­saa hojjatu yoo­ kaan namni nama gowwoo­msu kamiyyuu magaa­laa sana hin see­nu.
irra yaa’aa ture; gamaa gamana lagichaa irras mukni jiree­ nyaa firiia gosa kudhanii lamaa naqa­ tu dhaa­batee ture; innis ji’uma ji’aan firii naqata ture; baa­ lli muka sanaas saboo­ta fayyisuuf tajaa­jilaab ture. 3 Ammaan achi abaa­ rsi tokkoyyuu hin jiraa­ tu; tee­ssoon Waa­qayyoo­tii fi tee­ssoon hoo­lichaa magaa­lattii kee­ssa ni ta’a; garboo­nni isaas isa tajaa­jilu. 4 Isaan fuu­la isaa ni argu; maqaan isaas adda isaa­nii irratti ni barree­ffama. 5 Kana boo­ddeec halkan hin jiru; ifni ibsaa yoo­kiin ifni bii­ftuu isaan hin barbaa­chisu; Waa­ qayyo Goo­ ftaan ifa isaa­ niif ta’aatii. Isaa­nis baraa hanga barabaraa­tti nimoo’u. 6 Malee­ kaan sunis, “Dubbiin kun amanamaa fi dhugaa dha; Goo­ftaan, Waa­qni hafuu­rotad raa­jotaae sun waan dafee ta’uu qabu hojjattoo­ta isaa­tti agarsii­ suuf jedhee malee­kaa isaa ergee­ ra” naan jedhe. Yesuus ni Dhufa
“Kunoo, ani dafee nan dhufa! Namni dubbii raa­jiif kitaa­ba kana kee­ssa jiruu eegu sun eebbifamaa dha.” 8 Laga Jireenyaa Ani Yohaa­ nnis waan kana ras. Anis ‌Malee­kaan sunis laga bis­ cufa dhaga’eera; argee­ haan jiree­ nyaa qulqulluu yommuu waan kana dhaga’ee akka bilillee kan tee­ ssoo hoo­ 21 ykn callee / ​dooqa; ​25 ykn akkanallee jedhanii; ​ lichaa kee­ssaa burqu tokko natti 26 ykn midhaaguma; ​2 ykn diraa; ​2 ykn midhaani mukaa / ​ija; ​2 ykn gargaaraa; ​5 ykn duubatti; ​6 ykn agarsii­se. 2 Bishaan laga sanaas ayyaanota; ​ 6 ykn raagotaa; ​7 ykn himana / ​dubbii wadhakkaa daa­ndii magaa­lattiiz raagaa; ​ 7
argetti malee­kaa waan kana natti agarsii­saa ture sanaaf sagaduuf jedhee mii­la isaa irrattin lafa dha­ ye. 9 Inni garuu, “Naa hin sagadin! anis tajaa­jilaa sii­fi obbolee­yyan kee raa­gota wajjiin, akkasumas warra dubbii kitaa­ba kanaa eegan mara waliin tajaa­jiluu dha; Waa­ qayyoof sagadi!” naan jedhe. 10 Inni akkana naan jedhe; “Sababii Yeroon sun dhiyaa­ teef dubbii raa­jii kitaa­ba kanaa chaa­ppaa­dhaan hin cufin. 11 Nam­ ni jallinna hojjatu jallinna isaa­ tti haa fufuu; namni xuraa­waan xuraa­wummaa isaa­tti haa fufuu; qajee­laa­nis qajee­lummaa isaa­ tti haa fufuu; namni qulqulluun immoo qulqullummaa isaa­ tti haa fufuu.” 12 “Kunoo, ani dafee nan dhufa; gatiin kiyya na bira jira; tokkoo tokkoo namaa­tii­fis akkuma hu­ jii isaa­tti nan kenna. 13 Alfaa fi Omee­gaan, inni duraa­tii fi inni boo­ ddee, jalqabaa fi dhumni anuma. 14 “Warri akka muka jiree­ nyaa bira ga’aniif, karrawwanii­ nis akka magaa­lattii see­naniif mirga qabaa­chuuf jedhanii uffata isaa­ nii mii­ catan eebbifamoo dha. 15 Garuu saroo­nni, falfaltoo­nni, halalee­wwang, warri nama ajjee­ sanii­fi warri Waa­qota tolfamoo waa­ qeffatan akkasumas warri dhara jaa­ latanii fi warri dhara dubbatan hundinuu alatti hafu.
“Ani Yesuus, akka inni waan kana waldoo­ta kiristaa­naa kee­ssatti isinii dhugee­ssuuf h malee­ kaa kiyya ergee­ ra; ani hiddaa fi sanyii Daa­ witii; bakkalcha barii kan ifuu dha.” 17 Hafuu­ richii fi misirrittiini, “Koo­­­ttu!” jedhu; namni dhaga’us, “Koo­ ttu!” haa jedhuu. Nam­ ni dhee­ botu cufti haa dhufuu; kan barbaa­du cuftinuus bisaan jiree­nnaa tola haa fudhatu. 18 Nama dubbii raa­ jii kitaa­ ba kanaa dhaga’u hunda nan bee­ kkachii­ sa; jechuu­ nis nama ka­ miyyuu yoo inni dubbii kanatti waan tokkollee ida’e, Waa­qayyo dhayichawwanj kitaa­ ba kana kee­ ssatti ibsaman isatti ida’a. 19 Namni kamiyyuu yoo dubbii kitaa­ba raa­jii kana kee­ssaa waan tokkollee hirdhise, Waa­ qayyo muka jiree­nnaa­tii fi magaa­lattii qulqulluu kitaa­ba kana kee­ssatti ibs-aman kee­ ssaa qoo­ da isaa hir-dhisa. 16
Inni waan kana ragee­ssus, “Dhuguma ani dafee nan dhufa” jedha; aamiin, yaa Goo­ftaa Yesuus koo­ttu.
Ayyaa­nni Goo­ftaa Yesuu­si qulqulloo­ta cufa waliin haa ta’u; aamiin. 21
g 15 ykn hawadattoonni; ​h16 ykn dhuga-bawuuf / ​ragees­ j suuf; ​i17 ykn idaayyaan / ​intalli fuudhan; ​ 18 ykn balaa;
Jireenya Kee Kiristoos Keessaa Barumsa Tokko
Jalqaba Kiristoosiin beekuun walitti dhufeenya ati qabaachuu dandeessu hundumaa caalaa kan si gammchiisuudha. Kun immoo Waaqayyo isa madda jaalalaa fi humna hundaan olii qabuu wajjin jireenya gootummaa jalqabuudha. Seeronni Hafuuraa Afuran (Fuula dursaa ilaali) Kiristoosii wajjin jireenya jalqabuudhaaf wantoota namni tokko barbaadu sirriitti ibsu. Isa kana irra adeemanii ilaaluun walitti dhufeenya haaraa ati Kiristoosii wajjin qabdu ilaalchisee seerota jiran akka hubattuuf si gargaara. Seera Tokko: Waaqayyo nu jaallata kanaafuukaroora dinqisiisaa jireenya keenyaaf kenneera. Seera Lama: Nuti cubbamoota waan taaneef Waaqayyoo irraa adda baane. Kanaafuu Waaqayyoo fi karoora inni jireenya keenyaaf qabu beekuu hin dandeenyu. Seera Sadii: Yasuus Kiristoos qofaatu kan Waaqayyo cubbuu keenyaaf qopheesseedha. Isa qofaa keessaan jaalala Waaqayyoo fi karoora inni jireenya keenyaaf qabu beekuu fi miyeeffachuu dandeenya. Seera Afur: Tokkoon tokkoon keenya Yasuus Kiristoosiin akka fayyisaa fi Gooftaatti fudhachuu qabna, kana booda, jaalala Waaqayyoo fi karoora inni jireenya keenyaaf qabu beekuu dandeenya.
Jireenya Kee Kiristoos Keessaa
Firooma Kiristoosii Wajjin Qabdutti Amani Firooma Kiristoosii wajjin qabdutti amanuu dandeessa sababiin isaa guutummaatti siif dhiifameera, Waaqayyos si simateera. Firoommi sirriin Waaqayyoo wajjinii kun fannoo irratti du’uu Kiristoos qofaatiin argama. Efesoon 2:8-9 fuul 392 dubbisi. Luqqisiilee kana keessaa jechoonni barbaachisoon sadeen maaliif akka Waaqayyo biratti fudhatama akka arganne ibsu: Gaarummaa: hojii malee jaallatamuu, kennaa tolaa. Gaarummaan Waaqayyoo wajjin firooma uumuu keessatti ga’ee maalii taphata? (Firoommi kun siif hin malu, hojii gaariitiinis hin argattu. Kennaa tolaa Waaqayyo biraa kenname, kan yeroo Yasuusiin amantu fudhattu.) Fayyeera: Furameera, balaa irraa baraarame. Lakkoobsi kun fayyiteetta yeroo jedhu maal jechuu isaati? Maal irraa fayyite? (Roomaan 6:23 [fuula 318] gatiin cubbuu du’a akka ta’e dubbata. Yeroo akka Yasuus cubbuu keetiif fannaa irratti akka du’e amantu, firdii barabaraa irraa baraaramte, gatii cubbuu keetii baafachuu irraas.) Amanuu: amantaa, sammuu, qalbii, gochaan of kennuu. Amanuu Yasuusiin fudhachuu wajjin maaltu walitti fide? (Waaqayyoo fi dubbii Isaatti amanuu ykn of gatuu. Yeroo Kiristoosiin fudhattu Kiristoosii fi cubbuu keef siif du’uu Isaa irra amantii kee keewwatta. Qooda dandeettii ofii keetiin jaalala Waaqayyoo argachuu, amma waan Yasuus siif hojjeteen Waaqayyootti akka araaramte amanata.) Gaaffii Ijoo: Mee Waaqayyo dura dhaabatta haa jennu, Inni immoo, “Maaliifan akka gennatatti galtuu siif eyyama?” jedhee si gaafata. Ati maal deebifta?
Barumsa Tokko • Jalqaba
Firooma Kiristoosii wajjin Qabdu Hubachuu Firooma kee Kiristoosii wajjinii keessa dhugaalee si gammachiisu hedduutu jiru. Dhugaalee kanneen beekuun immoo akka ati hundee cimaa irratti guddattu bu’uureffatuu si gargaara. Dhugaalee kitaaba Qulqulluu shan kunooti, isaan waan Kiristoos siif hojjete irratti xiyyeeffatu. 1. Kiristoos cubbuu kee siif dhiiseera. Efesoon 1:7 (fuula 390-391). Yeroo akka Kiristoos cubbuu kee siif dhiisu amanatte cubbuun kee siif dhiifame... inni darbe, ammaa, egereenis. Akka cubbuun kee cufti siif dhiifame beekuun fayidaa maalii qaba jettee yaadda? 2. Kiristoos mucaa Waaqayyoo si taasiseera. Yohaannis 1:11,12,13 dubbisi (fuula 186). Akka ati mucaa Waaqayyoo taatuuf maaltu ta’e? (Kiristoosiin fudhatte. Akka Inni si fayyisuuf amanatte.) 3. Kiristoos jireenya kee seeneera, Inni gonkumaa si hin dhiisu Muldhata 3:20 dubbisi (fuula 502). Yoo Kiristoosiin fudhachuudhaaf kadhatteetta ta’e, Inni amma walittidhufeenya keessaniif eessa jira? Ibiroota 13:5 dubbisi (fuula 462). Kiristoos haala attamii keessatti si dhiisuu danda’a? (Hin jiru.) Akkasitti si’a meeqa Kiristoosiin fudhachuu barbaachisa? (Tokko qofa.) 4. Kiristoos jireenya haaraa siif kenne. 2 Qorontoos 5:17 (fuula 369). Yeroo akka Kiristoos Fayyisaa fi Gooftaa kee ta’e amantu, jireenya hafuuraa haaraa eegalta. Akkuma ati Isatti guddachaa adeemtuun immoo amaloota haaraa baay’ee si keessatti uuma.
5. Kiristoos jireenya barabaraa siif kenne. 1 Yohaannis 5:11-13 dubbisi (fuula 490). Jireenyi barabaraa eenyu keessaa argama? (Ilma Waaqayyoo.) Eenyutu jireenya bara baraa qaba? (Ilma Waaqayyoo kan qabu.) Ati Ilmicha qabdaa (Yasuusiin)? Ati jireenya barabaraa qabdaa? Jireenyi bara baraa siif eessaa eegala? Gaaffii ijoo: yoo har’a galgala duute akka jireenya barabaraa Waaqayyoo wajjin dabarsitu hangam mirkaneeffatte? (Itti marsi) %0 ——— %25 ——— %50 ——— %75 ——— %100 Gudunfaa: Fayidaan dinqisiisaan kun guutummaatti Yasuus Kiristoos irratti hunda’a. Hojiidhaan kan argatamu miti.Batala gaafa Kiristoositti amante siif kennaman. Amma yeroo kana dhugaalee shanan kanneen keessaa isa kamtu hiika siif kenna?
Firooma Kiristoosii wajjin qabdu keessatti shakkii to’achuu Yooma miirri barbaachisaa ta’e illee, firoommi ati Kiristoosii wajjin qabdu wantoota qabatamaa irratti hundeeffame, miira isa guyyuu jijjiiramu irratti miti. Mamiin, gaaffiileenii fi miirri addaa addaa jireenya nama kamii keessa iyyuu jira, isaan garuu walittidhufeenya namni kam Kiristoosii wajjin qabu safaruuf garuu isaan waan itti hirkatan miti. Kiristaanni (warra Kiristoosiin akka Fayyisaa fi Gooftaa isaaniitti amanatan) Waaqayyoo fi sagalee Isaa amanachuu keessatti amantiidhaan jiraata. Diyaagiraamiin konkolaataa kun walittidhufeenya qabatamaa/ dhugaa (Waaqayyoo fi sagalee Isaa), amantii (Waaqayyoo fi sagalee Isaa amanachuu kee), fi miira gidduu jiru ibsa.
Konkolaataan harkifamaa isaa wajiinis isa malees ni fiiga. Garuu harkifamaa isaa sanaan konkolaataa harkisuu yaaluun waan fayidaa hin qabneedha. Haaluma wal fakkaatuun miira irratti hin irkatin. Humna kan siif ta’u abdii sagalee Waaqayyooti malee miira kee miti. Bor immoo yoo Kiristaanummaan sitti hin dhagaa’amu yoo ta’e woo? Amantii kee amanamummaa Waaqayyoo fi fayidaa sagalee Isaatii irra keewwadhu. Sagalee Isaa yeroo caalaatti barattu, mamiidhaafii deebii qabatamaa kennuu dandeessa. Yeroo kana miirri kee immoo haala keetiif utuu hin ta’in dhugaa Waaqayyoo irratti hundaa’uu eegala.
Jireenyaaf waan qabatamaa Ati erga… …	Isa Kiristoos cubbuu keetiif isa siif kafale amntee, …	Hundee firooma Waaqayyoo wajinii beektee, …	Waa’ee firooma Waaqayyoo wajjinii erga dhugaa shanan barattee, firooma Kiristoosii wajjin qabdu irratti hirkachuu dandeessa. Torbee kana guutuu, akkuma Kiristoos keessatti guddachaa adeemtuun dhugaalee shanan kanneen qaama kee taasifadhu:
•	Siif dhiifameera: Qoloosaayisii 1:13-14 (fuula 407-408); Qoloosaayisii 2:13-14 (fuula 409-410); Ibroota 10:15-18 (fuula 455).
•	Ati mucaa waaqayyooti: Yohaannis 1:11-13 (fuula 129); Roomaa 8:15 (fuula 320); 1 Yohaannis 3:1 (fuula 486).
•	Kiristoos si keessa jira: Muldhata 3:20 (fuula 360); Galaatiyaa 2:20 (fuula 383-384).
•	Jireenya haaraa qabda: 2 Qorontoos 5:17 (fuula 369); Efesoon 2:4-5 (fuual 392).
•	Jireenya bara baraa qabda: 1 Yohaannis 5:11-13 (fuula 351); Yohaannis 5:24 (fuula 196); Yohaannis 10:27-29 (fuula 490).
Guyyaa guyyaatti dhugaa tokko fudhuutii itti yaadi. Luqqisiilee biratti tarreeffamanis dubbisi. Kun amma siif dhugaa waan ta’eef Waaqayyoon galateeffadhu. Dhugaalee kanneen beekuun guddina kee Kiristoos keessaatiif barbaachisaadha. Akka Kiristoosii wajjin firooma qabaatte torbee kana nama tokkotti himi. Gaaffii Ijoo: Yeroo ofii keenyaan jireenya Kiristaanummaa jiraachuuf yaallee jiraachuu immoo dadhabnu maaltu ta’a?
Jireenya kee Kiristoos Keessaa Barumsa Lama
Jaalala Waaqayyoo Mi’eeffachuu Walittidhufeenyi ati Waaqayyoo wajjin qabdu amansiisaadha, sababiin isaa karaa Kiristoos siif dhiifameera akkasumas Waaqayyos si simateera. Firooma amansiisaa siif kennuutti dabalee immoo, Waaqayyo akka ati isatti siqxee adeemtuu fi guyyuu isaa wajjin haasoftu siif hawwa.Kun immoo tokkummaa jedhama. Yeroo cubbuu hojjechuu filannu walittidhufeenyi keenya (mucaa Waaqayyoo ta’uun keenya hin tuqamu) garuu tokkummaa keenyatu cita. Fakkeenya Abbaa fi mucaa: firoommi abbaa kee isa lafarraa dhaabbataadha. Waan fedhe illee yoo goote, ati yeroo hundumaa mucaa isaati. Garuu mee abbaa kee irratti fincilte haa jennu, aartees manaa baate utuma abbaan kee ofitti si araarfachuuf yaalii taasisuu. Ati amma iyyuu mucaa abbaa keetiitii? (Eyyee.) Tokkummaan keessan woo attam ta’a? (Tokkummaan keessan cita.)
Walittidhufeenyaa fi tokkummaa Waaqayyoo wojjin qabdu waliin madaali. Firooma Waaqayyoo wajjin qabdu:
Tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabdu:
Yeroo Kiristoositti amante eegale (Yohaannis 1:11-12 fuula 186).
Yeroo Kiristoositti amante egale (Qoloosaayisii 2:6 fuula 409)
Kan bara baraati (1 Pheexiroos 1:3-4 fuula 471).
Ittifamuu danda’a (Isaayaas 59:2*)
Waaqayyootu to’ata (Yohaannis 10:27-29 fuula 211).
Hanga tokko nutu to’ata (1 Yohaannis 1:9 fuula 484)
Hin jijjiiramu (Ibroota 13:5 fuula 462).
Cubbuu yeroo hojjennu jijjiirama (Faarsaa 66:18**)
Kiristaanonni hundinuu yooma Waaqayyoo wajjin firooma qabaatan illee Kiristaanonni hundinuu Isaa wajjin tokkummaa hin shaakalan. Attamitti Waaqayyoo wajjin yeroo mara tokkummaa qabaanna?
*	Isaayyaas 59:2: ”Yakki keessan isinii fi Waaqayyo keessan gidduu goree gargar isin in ittise, akka isiniif hin dhageenyettis... fuula isaa isin irraa in deebise.” **	Faarsaa 66:18: ”Ani hamaa gochuu garaa kootti utuun yaadeera ta’ee, gooftichi matumaa ana hin dhaggeeffatu ture.”
Barumsa Lama • Jaalala Waaqayyoo Mi’eeffachuu
Barbaachisummaa Jaalala fi Dhiifama Waqayyoo Cubbuun akka hundumti keenya jaalala Waaqayyoo hin mi’eeffanne nu dhorka. Garuu namoonni baay’eetti cubbuun maal akka ta’ee fi maal akka hin ta’in itti bitaach’eera. Cubbuun maalii? Inni gowwomsuu, sobuu, amala xuraa’aa, kkf irra ni caala. Gochi kunneen ilaalcha cubbuu irraa maddu. Hiikaan cubbuu salphaadhumatti: waan Waaqayyo barbaadu caalaa waan ofii barbaadnu hojjechuudh– gochaa fi ilaalchaan. Cubbuun maal fida? Kirstaana kan hin ta’in (nama Kiristoositti hin amannee [fuula 537 dubbisi]), cubbuutu firooma Waaqayyoo irraa dhowwa. Efesoon 2:1-3 dubbisi (fuula 391-392). Namoonni jireenya naamusa qabu jiraachuudhaan Waaqayyo bira ga’uudhaaf yaalii taasisanoo? Isaan Waaqayyo irraa adda baafamaniiruu? Maaliifi ykn maaliif miti? (Fuula viii ilaali. Jireenya naamusa gaarii qabu jiraachuudhaa Waaqayyo bira ga’uu hin dandeenyu sababiin isaa cubbuun Waaqayyo irraa adda nu baasa. Kan walitti nu fiduu danda’u Yasuus Kirsitoos qofaadha.) Cubbuun kiristaanota firooma Waaqayyoottii kuta. 1 Yohaannis 1:6-8 dubbisi (fuula 484). Gudunfaa: Hundumti keenya yakkineerra. Kanaafuu, ilaalcha fi gocha keenyaaf dhiifama Waaqayyo biraa argachuu nu barbaachisa.
Bu’uura Jaalalaa fi Dhiifama Waaqayyoo Bu’uurri dhiifama Waaqayyoo du’uu Kiristoos, kunis immoo gara firooma Waaqayyoo isa sirriitti nu fiduufiidha. Du’uun Kiristoos jireenya keenya guyyuu keessatti Waaqayyoo wajjin firooma akka qabaannuuf bu’uura. 1 Pheexiroos 3:18 dubbisi (fuula 476). Qoloosaayisii 2:13-14 dubbis (fuula 409-410). Bara kun barreeffametti, “galmeen himataalee” kan namoonni ittiin himataman tartiibaan barreeffamee balbala mana hidhaatti fannifama ture. Yeroo murtiin itti kennamu ykn hirphi kafalamu, abootiin taayitaa tarreeffamicha achi irraa fuudhanii “guutummaatti kafalameera” jedhanii barreessu. Kun immoo akka himatamaan kun lammata isaan kanaan hin himatamneef mirga kennaaf. Amanaan isa Kiristoos cubbuu isaatiif kaffaleef amane cubbuu isaatiif deefamee hin gaafatamu. Gatiin cubbuu isaatii “guutummaatti kaffalameera” woo. Waaqayyo biraa dhiifama qaba. Waaqayyo cubbuu kee maal godhe? (Waaqayyo siif dhiiseera.) Kiristoos cubbuu kee maaqaaf du’e? (Hunduma isaaniitiif.) Yeroo Kiristoos fannoo irratti siif du’e, cubbuu kee keessaa meeqatu egeree keessa ture? (Hunduma isaanii.) Akka guutummaatti siif dhiifame beekuun jireenya kee guyyuu keessatti garaagarummaa maalii fida?
Jaalalaa fi Dhiifama Waaqayyoo Guyyuu Shaakaluu Dandeessa Yooma cubbuun kee guutummaatti siif dhiimae illee, tokkummaan kee Waaqayyoo wajjin akka addaan hin cinneef guyyuu cubbuu kee irraa qalbii diddiirrachuu qabda. Ofii kee bakka fakkeenya abbaa fi mucaa kaa’i (fuula 539). Akka tokkummaan ati abbaa kee wajjin qabdu iddootti deebi’uuf maal goota? Attamitti tokkummaa kee Waaqayyoo wajjiin deebifattuuf maal akka gootu haa ilaallu. 1 Yohaannis 1:9 dubbisi (fuula 484). A. Himachuu: waa’ee cubbuu irratti Waaqayyoo wajjin waliigaluu. Yeroo Waaqayo waan ati hojjette tokko cubbuu akka ta’e gara qalbii keetiitti fidu cubbuu kee isatti himadhu. Himachuun immoo yoo xiqqaate waan sadii of keessaa qaba: 1. Waliigali Waaqayyoo wajjin akka cubbuu hojjette. 2. Galateeffadhu Waaqayyoon waan Inni siif dhiiseef. 3. Amani Waaqayyoon akka inni ilaalchaa fi gocha kee isa dogongoraa gedderachuu si dandeessisuuf. Cubbuu irraa gara Waaqayyootti deebi’uudhaan (qalbii jijjiirrannaa), jaalalaa fi dhiifama isaa isa Kiristoos fannoo irratti du’uudhaan argame shaakalta. Qooda yakkamaa ykn cubbamaa ta’uun sitti dhaga’amu, akka tokkummaan kee Waaqayyoo wajjin qabdu deebi’ee haareffametu sitti dhaga’ama. B. Himachuu: gara hojiitti jijjiiruu. Ammuma ykn utuu gara siree kee hin dhaqin dura: 1. Cubbuun dhokate yoo si irra jiraate akka mullisu Waaqayyon gaafadhu. 2. Isaan kana immoo waraqaa irratti tarreessi. Amanamaa ta’i; kun sii fi Waaqayyo gidduutti.
3. Erga barreessitee booda, isa irratti immoo abdii 1 Yohaannis 1:9 barreessi (fuula 484). 4. Waaqayyo karaa waan Kiristoos fannoo irratti siif hojjeteen dhiifama waan siif godheef galateeffadhu. 5. Tarreeffamicha baqasii gati. Cubbuu tokko ala meeqa Waaqayyootti himatta? (aluma tokko) Cubbuu yoom himachuu qabda? (Battala cubbuu ta’uu isaa hubattetti.) C. Himannaa: firii isaa shaakaluu. Erguma cubbuu kee himattee booddas cubbamaa ta’uun amma illee yoo sitti dhaga’ame woo? [Faarsaa 32:3-5*; 103:12** dubbisi.] (Akka siif dhiifame isa sagaleen Waaqayyo jedhu amanadhu malee miira keetti hin irkatin.) Dubbisi kunneen waa’ee yakkaa fi qullaa’ummaa maal jedhu? (Yoo cubbuun hin himatamin jiraate yakki dhaabatee hafuun sababa qabaata.) Waa’ee yakkaa fi dhuufamaa ilaalchisee waan baratte irra dhaabattee hima kana attamitti xumurta? “Yeroo ani cubbuu koo hundumaa isatti himadhetti, ”
*	Faarsaa 32:3-5: “Yeroon cubbuu koo himachuu dhiisetti, guyyaa guutuu aaduu kootiif namummaan koo gad dhume; guyyaa fi halkan harki kee waan anatti ulfaateef, humni koo akka waan ho’i bonaa rukuteetti na keessatti in goge. Yommus ani cubbuu koo sitti nan himadhe, yakka koos ani hin dhoksine; ani, ‘Irra-daddarbaa koo ati immoo yakka cubbuu kootiif anatti murame anaaf dhiifte.’ ” **	Faarsaa 103:12: “Ba’i-biiftuu lixa-biiftuuttii akka fagaatu, innis irra-daddarbaa keenya nuttii in fageessa.”
Jireenyaaf waan qabatamaa Har’a utuu gara siree kee hin dhaqin waa’ee jaalalaa fi dhiifama Waaqayyoo waan baratte gara jireenya keetti fiduuf yeroo xiqoo fudhadhu. Galgala kana tarreefama kee barreessuu hin dagain (Fuula 543). Guyyuu qofaa keetti Kitaaba Qulqulluu daqiiqaa 15 dubbisuudhaan kadhachuudhaanis Waaqayyo duratti dabarsi. Yaada kannen ilaali: 1. Seenaa dargaggeessa abbaa isaa dhiisee badee dhaala isaa balleessee dubbisi. Seenichi Yasuusiin dubbatame Luqaas 15:11-32 irratti argama (fuula 159-160). Waa’ee firoomaa, dhiifamaa fi tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabnuu seenaan kun maal nutti hima? 2. Galaatiyaa 5:16-23 dubbisi (fuula 388-389). Akka Waaqayyo jireenya kee keessatti hojjetu eeyyamiitii addaa addummaa isaa ilaali. Yeroo jireenya kee keessaa waan Waaqayyoon hin gammachiifne argitu akka sagalee 1 Yohaannis 1: 9 (484) irra jiruutti sirreessi, kana booda firummaa Waaqayyo wajjjin qabdutti gammadi. Gudunfaa: Jaalalaa fi dhiifama Waaqayyoo isa guddaa hubachuun akka Kiristaanonni firummaa guddataa adeemu Isaa wajjin qabanitti gammadan taasisa. Gaaffii Ijoo: Huumana Waaqayyo jireenya Kiristaanaa jiraachisuuf kaa’e Kiristaanni tokko attamitti mi’eeffachuu danda’a?
Jireenya Kee Kiristoos Keessaa Barumsa sadii
Burqaa Humnaa Guyyuu jaalalaa fi dhiifama Waaqayyoo mi’eeffachuudhaaf battala cubbuun kee sitti beekametti qalbii jijjiirradhu. Cuubbuu ofii himachuunii fi jaalalli Waaqayyoo tokkummaa abbaa kee isa waaqa irraa wajjin qabdu haaressa. Amma egaa jireenya kiristaanummaa jiraachuu eegalaa jirta, kun immoo safara jireenyaa ykn amala gaarii qabaachuuf utuu hin ta’in Waaqayyo jaalalaa wajjin dhuunfaatti firummaa qabaachuudha. Yohaannis 7:37-39 dubbisi (fuula 206). Firoommi keenya waan Waaqayyo karaa Yasuus Kiristoos hojjete irratti hundaa’a, akkasumas humni jireenya Kiristiyaanummaa jiraataa nu jiraachisus guutummaatti Waaqayyo keessaa dhufa. Kompiiterri waan hojjetameef hundumaa hojjechuuf dandeettii qaba garuu humna ofii isaatii hin qabu. Haaluma walfakkaatuun, eenyummaa haaraa Kiristoos keessatti qabduun, Kiristoos keessatti akka uumama haaraatti jiraachuudhaaf dandeettii si barbaachisu hundaa qabda. Walitti fufiinsaan burqaa humnaa isa ta’e Hafuura Qulqulluutti qabamtee jiraachuu qabda.
Barumsa sadii • Burqaa Humnaa
Hafuurri Qulqulluun Burqaa Huumnaa Jireenya Kiristaanummaati Hafuurri Qulqulluun Waaqayyoodha (1 Qorontoos 2:11-12 fuula 338). Si keessa jiraachuuf dhufe (Roomaa 8:9 fuula 320). Inni biyya lafaa waa’ee cubbuu fi waa’ee haqaa hubachiisuuf dhufe (Yohaannis 16:8 fuula 224). Inni gara dhugaatti qajeeluuf dhufe (Yohaannis 16:13 fuula 225). Ulfina Yasuusiif kennuuf dhufe (Yohaannis 16:14 fuula 225). Firummaa Waaqayyoo wajjin qabdu keessatti Hafuurri qulqulluun ga’ee maalii taphata? Roomaa 8:14-16 (fuula 320-321). (Akka ijoollee Waaqayyoo taane nuuf mirkaneessa.) Akka ati jireenya kee keessatti maal godhattuuf hawwa? Galaatiyaa 5:2223 dubbisi (fuula 388-389). Isaan kanneen keessaa akka Waaqayyo si keessatti guuddisuuf isa kam barbaadda? Akka firiin kun nu keessatti godhatamee argamuuf maal gochuu qabna jedha Yasuus? Yohaannis15:4-5 dubbisi (fuula 223). (Kiristoos keessa jiraachuu qabna, Isatti hirkadhu isattis siqi.) Hafuurri Qulqulluun akka hojjettuuf maal si hidhachiisa? Hujii Ergamootaa 1:8 dubbisi (fuula 238). Siif dhugabaatuu Kiristoos ta’uu jechuun maal jechuudha? (Dhugabaatuun waan dhaga’ee fi arge dubbata. Dhugabaatuun kiristaanaa immoo dhugaa waa’ee Kiristoos waan beeku namoota warra kaanitti hima.) Dhugabaatuu ta’uudhaaf humni Hafuura Qulqulluu maaliif ni barbaachisa jettee yaadda? (Jecha sirrii fi ija jabina ittiin jechicha jettu siif kennuuf abdii siif kenne.)
Kiristaana Hundumaatu Humna Hafuura Qulqulluu Mi’eeffata Miti Karaa hojii Hafuura Qulqulluu kiristaana taate (Efesoon 1:13 fuula 391). Yerosumaa eegalee Hafuura Qulquun si keessa buufateera (Yohaannis 14:15-17 fuula 221-222). Hafuurri Qulqulluun yoo hunduma Kiristaanotaa keessa jiraate iyyuu, kiristaanota hundumaatu isaan gaggeeffamee isa irraa humna fudhata miti. Kitaabini Qulqulluun akka namni gosi sadii jiru dubbata:
1) Nama anummaa (1 Qorontoos 2:14 fuula 339)
Warra akka Yasuus gatii cubbuu isaanii baasuudhaaf du’e hin amanne keessa Kiristoos hin jiraatu.
Geengoon kun jireenya nama tokkoo mullisa. Namni anummaa fedha ofii isaatiin jireenya isaa gaggeeffata, kanaafuu (A) isa to’ata. Kirstoos ( ) jireenya nama anummaa keessa hin jiraatu, kanaafuu geengoo keessa ala jira.
2) Nama Hafuuraa (1 Qorontoos 2:15 fuula 339) Warra Kiristoosiin akka fayyisaa isaaniitti amanatan jireenya
Kiristaanummaa jiraachuudhaaf humna Hafuura Qulqulluu amanatu.
Namni hafuuraa Kiristoosiin ( ) jireenya isaatti afeera, karaa hafuura Qulqulluus akka to’atu ayyama. Kanaafuu namni kun Kiristoosiin gaggeeffama.
3) Nama foonii (1 Qorontoos 3:1-2 fuula 339)
Warra akka Yasuus cubbuu isaaniitiif kaffale amanatan, garuu warra yaalii ofiitiin jireenya kiristaanummaa jiraachuu yaalaniidha. (Foonni hafuuraan morma.) Kiristaanni foonii humna fooniin jiraata malee human hafuura qulqulluutiin miti.
Kiristoos yooma jireenya nama foonii keessa jiraate illee, hafuurri qulqulluun akka isa gaggeessuuf hin ayyamamneef. Namichumatu of to’ata. Gaaffii furtuu: Geengoo isa kamtu jireenya kee bakka bu’a?
Hafuura Qulqulluun Guutamuu ni Danddeessa Jireenyi hafuuraan guutame jireenya Kiristoosiin gaggeeffamuudha. Akkasitti Kiristoosi si keessaa fi karaa kee humna hafuura qulqulluutiin jiraata. Amantiidhaan qofa hafuura qulqulluudhaan guutamuu dandeessa, kun jireenya firi qabeessa isa abdachiise qabaachuu si dandeessisa. Tarkaanfiileen sadan gadii attamitti akka hafuura qulqulluudhaan guutamuu dandeessu ibsu. Himadhu: Cubbuu beekamaa himadhu. Faarsaan 66:18, “Ani hamaa
gochuu garaa kootti utuun yaadeera ta’ee, gooftichi matumaa ana hin dhaggeeffatu ture.” Hafuuraan guutamuudhaaf cubbuu beekamaa hundaa himachuun maaliif barbaachise? (Hanga Waaqayyo duratti garaa qullaa’aa qabaannutti Inni nuu wajjin tokkummaa qabaachuu hin danda’u.) Kennadhu: Jireenya kee hundaa Waaqayyootti kennadhu. (Roomaa 6:12-13 fuula 317.) Jireenya kee hundaa kennachuun maalfaa dabalta jettee yaadda? (Waa’ee horii, firooma, hojii, maatii kootii, kkf utuun hin murteessin Waaqayyoon gaafachuu.) Amani: Akka Hafuurri Qulqulluun si guutu amani. 1. Akka ati Hafuura isaatiin guutamtuuf Waaqayyo abboomeera (Efesoon 5:18 fuula 397). 2. Waaqayyo akka fedha Isaatti gaaffii keenyaaf deebii kennuuf nu abdachiiseera (1 Yohaannis 5:14-15 fuula 351). Amantii duwwaadhaan Hafuura Qulqulluutiin guutamuu dandeessa. Isa kana ibsuuf kun kadhannaa gaariidha: “Yaa abbaa jaallatamaa, akka ani jireenya koo gaggeeffachaa ture nan beeka, kanaafuu, ani si yakkeera. Karaa du’a Kiristoos fannoo irrattii cubbuu koo waan naaf dhiifteef galatoomi. Amma Kiristoos teessoo jireenya kootii akka qabatu nan afeera. Akka an guutamu akkuma abboomte Hafuura Qulqulluun na guuti, yoo ani amantiin si gaafadhe guchuuf akkuma abdachiifte. Amantii koo ibsachuuf, amma waan jireenya koo to’attee fi waan Hafuura Qulqulluutiin na guutteef galatoomi.” Kadhannaan kun fedha garaa keetii ni ibsaa? Yoo kdhannaa kana ammuma kadhatte maaltu ta’a jettee yaadda? Yoo kun fedha garaa keetii ta’e, kadhannaa kana kadhattee Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu ni dandeessa.
Waan Qabatamaa Jireenya Ilaallatu Yoo karaa cubbuu ofii kee deebitee to’achuu eegalte– abboomamuu diduudhaan–maqumaaf nama hafuuraa taata (qulqulluu ol galfatta xuraa’aa baafatta). Shaakalli barbaachisaan kun akka jaalalli Kiristoos Jireenya kee to’atu dandeessisa. Gadi baafadhu: Cubbuu kee himadhu (1 Yohaannis 1:9 fuula 484; Ibiroota 10:1-25 fuula 454-455). Himachuu keessa wantoonni sadii akka jiran hin dagatin: 1. Waliigali Waaqayyoo wajjin akka isa yakkite. 2. Galateeffadhu Waaqayyoon waan inni siif dhiiseef. 3. Amanadhu Waaqayyoon ilaachaa fi gocha kee isa dogongoraa akka qajeelchu. Ol galfadhu: akka hafuurri jireenya kee keessa jiru amantiidhaan labsi (Efesoon 5:18 fuula 397). 1. Harka kenni to’annaa jireenya kee Kiristoositti kenni. 2. Amani akka Inni amma si qajeelachaa fi humna siif kennu. Guyyuu daqiiqaa 15-f Kitaaba Qulqulluu dubbisuu fi kadhannaadhaan Gooftaa wajjin dabarsi. Yaadi muraasi kunooti: 1. Efesoon 5:18-21 (fuula 397), fi Qoloosaayisii 3:12-17 (fuula 411) dubbisi. Kutaa kanneen lameen waa’ee jireenya hafuuraan guutee maal akka jedhan wal bira qabi. 2. Kadhata Phaawuloosiin Efesoon 3:14-21 (fuula 394) irraa dubbisi. Iriyyaa isaatiif “humni” inni hawwu kun maali? Humni kun immoo eessaa dhufa, maalis nuuf hojjeta? 3. Seenaa ergamootaa yeroo buubbeen ka’e isaaniif yaaduu Isaa shakkuu isaanii dubbisi (Maarqos 4:35-41 fuula 55). Isaan maaliif sodaatan? Waa’ee Waaqayyoo maal shakkan?
Gudunfaa: Hafuurri Qulqulluun jireenya Kiristaaf burqaa humnaati. Yeroo ati Yasuus Kiristoosiin amanattu hafuurri Waaqayyoo immoo amala ofii isaa si keessatti godhata, akka ati dhugabaatuu isaa taatuufis humna siif kenna. Gaaffii ijoo: Yeroo jireenya kiristaanummaatti bilchaataa adeemtu Kiristoosiin caalaatti akka beektuuf Waaqayyo attamitti siif karoorse?
Jireenya Kee Kiristoos Keessaa Barumsa afur
Kiristoos Keessatti Guddachuu Hafuurri Qulqulluun akka ati jireenya Kiristoos gaggeessu jiraattu barbaada. Yeroo jireenya hafuuraa baafachuu itti fuftu (gad-baafachuu–cubbuu himachuu, fi ol galfachuu– guutumma hafuuraa fudhachuu), Waaqayyoo wajjin tokkummaa cimaa qabaatta kun immoo Kiristaanummaatti bilchaataa guddachuu si dandeessisa.
Bilchinni yeroo fudhata–karaa kutaan hin jiru.
Adeemsa jireenya guutuudha!
Kiristoositti Guddachuun Maal Jechuudha? Kana jechuun Kiristoosiin beekuutti, jaalala Isaaf qabnuu fi Isaaf abboomamuutti guddachuu jechuudha. Waa’ee jireenya barbaraa Yasuus maal jedha? Yohaannis 17:3 dubbisi (fuula 227). (Waaqayyoon beekuu.) Kakuu Moofaa keessa abboommota 600 caalantu jiru. Yasuus isa Maatewoos 22:37-39 (fuula 50) irraa kana maaliif adda baasee mullise? (Yoo dhugaatti Waaqayyoon ni jaallanna ta’e, abboommota warra kaanis raawwachuu keenya.) Waaqayyoon garaa kee guutuu, lubbuu kee guutuu fi sammuu kee guutuu jaallachuun attamitti jireenya kee irratti dhiibbaa geessisa? Jaalalli kee Isaaf guddachaa adeemuun firiin isaa maali? Yohaannis 14:21 (fuula 222) dubbisi. Akkuma mucaan tokko uumamaan firummaa jaalalatti maatii isaa gidduutti guddataa adeemu, atis immoo firummaa jaalala isaa wajjin qabduutti guddachuun si irraa eegama.
Barumsa afur • Kiristoos Keessatti Guddachuu
Kiristoositti Attamitti Guddachuu Dandeessa? Quunnamtiin firummaa kamiifuu barbaachissaadha, firummaa ati Kiristoosii wajjin qabdu illee taanaan. Akkuma humna Hafuura Qulqulluutti jiraattuun firummaa Kiristoosii wajjin qabdutti guddachuuf kan si gargaaran ilaalcha quunnamtii afurtu jiru:
Waaqayyo Kadhata MitiKiristaana
Kitaaba Qulqulluu: Waaqayyo karaa Kitaaba Qulqulluu nu quunnama, karaa sana amala Isaa fi fedha Isaas nuuf ibsa.
2 Ximootewoos 3:16-17 (fuula 434-435) dubbisi. Armaan gaditti bu’aan isaa dubbisa kana keessatti tarreeffameera: Dhugaan maal akka ta’e nu barsiisa: dhugaa waa’ee Waaqayyoo fi waa’ee ofii keenyaa dhiheessa; Jireenya keenya keessa dongora jiru nutti mullisa. Yeroo nuti dogongorru nu qajeelcha. Waan sirrii hojjachuu nu barsiisa: jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu nu barsiisa. Fayidaalee kanneen keessaa amma kamtu baayyee si gargaara? Dubbisa Kitaaba Qulqulluu hanga ammaatti qabaachaa turte hangam akka si gargaare akkamitti xiinxalta? Kadhata: Waaqayyoo wajjin karaa kadhannaa dubbanna–yaada, kan nu barbaachisuu fi fedha keenya isaaf hirra fedha isaa akka nuuf godhuuf. Filiphisiyuus 4:6-7 (fuula 405) fi 1 Yohaannis 5:14-15 (fuula 490) dubbisi. Luqqisiileen kunneen waa’ee kadhannaa maal jedhu? (Waa mara isa kadhanna. Yoo akka fedha Isaatti kadhanne, nu dhaga’aa nuuf deebisas). Waa’ee maaliifaa kadhachuu dandeessa? 1 Tasaloonqee 5:18 (fuula 418) dubbisi. Isa galateeffachuun maaliif? (Waaqayyo akka isa galateeffannu barbaada, isa amanachuu keenya akka ibsinus). Tokkummaa: Kiristaanotaa wajjin tokkummaa qabaanna–wal toosifna wal jajjabeessinas.
Qoraanni baay’atee walii wajjin boba’ee ifa kenna, garuu yoo tokko keessaa fuutee moggaa keesse ni dhaama. Kanaaf tokkummaan Kiristaanota warra kaanii wajjinii ni barbaachisa. Ibiroota 10:24-25 (fuula 455) fi Filmoonaa 1:7 (fuula 440) dubbisi. Kiristaanota warra kaanii wajjin yeroo qabaachuun maaliif? (Akka wal jajjabeessinuuf, wal jaallachuu fi hojii gaarii waliin hojjechuuf). Kun amma maaliif si barbaachisa? Hujii Ergamootaa 2:42-47 (fula 243) dubbisi. Yeroo hundaa tokkumaa Kiristaanotaa si tumsu eessaa argatta? (Waldaa Kiristaanaa gaarii ykn gartuu qu’annaa Kitaaba Qulqulluu). Muuxannoo kiristaanummaa warra kaan warra Waaqayyoon jaallatanii fi warra Isaa wajjin adeemaniif hiruun baay’ee barbaachisa, akka isaanis kan isaanii nuuf hiraniif gochuunis. Waldaan kiristaanaa bakki itti wal arginuu fi dubbii Waaqayyoo itti dhageenyu bakka Waaqayyo kiristaanoti akka wal arganiif isaaniif qopheesseedha. Qu’annaan Kitaaba Qulqulluu fi walga’iin kiristaanotaa hedduu barbaachisaadha. Dhugaba’umsa: Warra miti-kiristaanaatti dhugaaba’uudhaan isaaniin walquunnamna–firummaa Kiristoosii wajjin qabnu isaanitti himna. Hujii Ergamootaa 4:12 (fuula 245) dubbisi. Akka ati waa’ee Kiristoos warra kaanitti himtuuf maaltu si kakaasa? (Wantoota Kiristoos jireenya kee keessatti hojjete). Waan Kiristoos jireenya kee keessatti hojjate eenyutti himuu feeta? Seeronni Hafuuraa Afuran (fuula vii ilaali) ergaa wangeelaa gabaatti dhiheessa akka ati nama biraaf isa hirtuutiif. Gudunfaa: 1 Qorontoos 3:6-7 (fuula 339) dubbisi. Waaqayyo burqaa guddina keetiiti. Bilchina guddina hafuuraa “yaalii ofii keetiin” guddachuu hin dandeessu. Yeroo humna Hafuura Qulqulluu keessa jiraattu, Kitaaba Qulqulluu dubbiftu, kadhattu, namootatti waa’ee Kiristoos himtuu fi amantoota warra kaanii wajjin yeroo yeroo qabaattu Waaqayyo immoo firii fi bilchina si keessatti qabaachuudhaaf hojii isaa hojjeta.
Waan Qabatamaa Jireenya Ilaallatu Amaloota akka Waaqayyo si keessatti godhatu feetu tarreesi. 2 Pheexiroos 1:5-9 (fuula 479) waa’ee guddina Kiristaanaa nuuf ibsa. Akka dubbisa kanaatti, gufuun guddina keenyaa maalfa’i? (Akka cubbuun keenya nuuf dhiifame irraanffachuu fi gara-laafummaa Waaqayyo nuuf qabu dagachuudha). Yaadadhu: Waaqayyo haalduree tokko malee nu jaallata, akkuma jirtutti. Jaalalli Inni safara malee siif qabu guddina kiristaanummaa keetii irratti hin hundaa’u. Guyyuu Kitaaba Qulqulluu dubbisuu fi kadhachuuf yeroo ramadi. Ittiin jalqabuuf Kakuu Haaraa keessaa Kitaabi Yohaannis kitaaba gaariidha (fuula 185). Yeroo dubbistu immoo lakkoobsota sitti tolan, kan hiika siif kennan jala saradhu. Akka Waaqayyo eenymmaa isaa sitti mullisuu fi attamitti akka isaaf deebi kennitu irratti kadhadhu. Yaada kee immoo qabsiisatti barreeffadhu, mata-duree kadhannaa keetii tarreessi, yeroo deebii argattus. Qu’annaa dabalataatiif, dubbisa barumsa kanaa keessa deebi’i. Kutaaleen biroon ati qu’attu immoo, Qoloosaayisii 1:9-12 (fuula 407); Maatewoos 7:7-11 (fuula 12-13); 2 Qorontoos 5:17-21 (fuula 369-370); 1 Qorontoos 12:12-27 (fuula 354); Yohaannis 15:1-7 (fuula 222-223); fi Luqaas 9:23-26 (fuula 141). Waa’ee Kiristoos namatti himuu hin dagatin.
NT / Oromo
New Testament (pocket size) in Oromifiya. Includes supplementary material for new believers.